အေးချမ်းပျော်မွေ့စွာ အများစုနည်းတူ မိုးရည်လှိုင်နှင့်ပပနွယ်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရောက်လာကြမှ ပပနွယ်တယောက်ဗွေဖောက်ကာ အတန်းဘေးကပ်၇က်တန်းခွဲကအောင်အောင်ထွန်းနဲ့စာအဆက်အသွယ
်ဖြစ်လာကြသည်။ မိုးရည်လှိုင်ကသိသော်လည်း မတားဖြစ်ဘဲလွှတ်ထားလိုက်တယ်။ တား၍ရမည်ပုံမပေါ်သည်ကတကြောင်း ပပနွယ်ကစာတော်၍စိတ်ချသည်ကတကြောင်းလည်းဖြစ်နေသည်။
မိုးများလှသည့် မြို့ကလေးတမြို့။ ။
မရဘူးနော် ပပ" တစုံတရာအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုပိတ်ပင်လို၍ပြောလိုက်သော်လည်း..
မရိပ်မိသော်လဲမိုးရည်လှိုင်ကကပ်၍ "ကဲမနေနဲ့" ဟုမာန်လိုက်သေး...
နေရာကမြို့အထွက်ကားလမ်းမကြီးဘေးဖြစ်သဖြင့်လူသူအသွားအလာပြတ်နေပြီး အဝေးပြေးကားများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကားအနည်းငယ်အပမရှိပေ။ အောင်အောင်ထွန်းတို့ရပ်စောင့်နေရာအနီးအရောက်တွင် ပပနွယ်စက်ဘီးအရှိန်လျှော့ခိုက်မိုးရည်လှိုင်ကစက်ဘီးနောက်ကယ်ရီယာပေါ်မှ
"ဘာ !..."မိုးရည်လှိုင်ကဆက်ကနဲ အော်လိုက်မိသည်။ သူအော်လိုက်တာလန့်သွာသလိုဖြစ်ရာမှ
ပပနွယ်တို့ထိုင်စကားပြောနေတဲ့ဆီလှမ်းမျှော်ကာ မြန်မြန်ပြန်လာကြပါစေ ဟုဆုတောင်းနေမိ၏။
Posted by L at 3:57 PM Links to this post3comments
Posted by L at 6:10 AM Links to this post5comments
Posted by L at 5:59 AM Links to this post0comments
သူငယ်ချင်းသစ်များတချို့တွင် ခပေါင်းရွာမှကျောင်းတက်လာသူသန်းသန်းမြင့်နှင့် ထီးနီကုန်းမှလာသူချိုချိုတို့
နှင့်စကားပြောဖြစ်ချိန်တချိန်တွင် အတန်းတွင်းမှကိုတင်အောင့်အကြောင်းပြောပြသည်။ ကိုတင်အောင်မှာဘုန်း
ကြီးကျောင်းသားဖြစ်လျှက် ဗေဒင်ကောင်းစွာတွက်တတ်ကြောင်းစကားစပ်မိရာ သဇင်ဝေစိတ်ဝင်စားသွားပြီး
အသင်းခေါင်းဆောင်အစားထိုး ရွေးချယ်ရသည်ကိုလဲ သဇင်ဝေလျစ်လျူရှုခဲ့မိသည်အထိထင်ရာစိုင်းနေခြင်း
တွင်လဲ ဆရာသည်တစုံတရာမပြောဘဲနေ၍အေးချမ်းလှသောမေတ္တာတို့နှင့် တိတ်ဆိတ်စွာနေနိုင်လွန်းလှ
ကုက္ကိုလ်ပွင့်ပန်းနုရောင်ကမ္ဗလာသည် အညိုရောင်ကမ္ဗလာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွား၍ ကုက္ကိုလ်ရွက်တို့ကရွှေဝါရောင်
အဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်ဆင်းပြီး ဝေ့ကာဝေ့ကာ ကနွဲ့ကလျကြွေသက်လျက် ကျောင်းတော်ကြီးမှအပြီးပိုင်ခွဲခွာသွား
ကြတော့မည့် ပန်းကလေးတချို့ကိုရွှေကမ္ဗလာခင်းလို့နှုတ်ဆက်နေကြတော့သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း
နောက်ဆုံးဖိုင်နယ် စာမေးပွဲဖြေမည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့အားသွားရောက်ဖြေဆိုရမည့် ကျောင်းအမှတ်၊
ခုံနံပါတ်တို့ချပေးပြီးဖြစ်သည့်အပြင် စာကျက်ချိန်အတွက်ကျောင်းပိတ်ပေးလိုက်သောတနေ့။ တကယ်တမ်း
သဇင်ဝေအဖို့ တွယ်တာလွမ်းဆွတ်မှုတို့နှင့် ကျောင်းဝန်းကြီးအတွင်းတယောက်ထဲလျှောက်သွားနေမိသည်။
အောက် သွားရောက်မည့်ခြေဦးတည်ခိုက် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှသဇင်ဝေကဲ့သို့လွမ်းနေကြသူများဟိုတချို့သည်
"သဇင်ဝေ...နင်အိမ်မပြန်သေးဘူးလား" ဟု ကိုတင်အောင်ကမေးသဖြင့်
"မပြန်သေးရင်ဗေဒင်တွက်တတ်တယ်လို့ မသန်းသန်းမြင့်ကပြောတယ်။ တွက်ပေးပါလား"
"နင်ဒီနှစ်သိပ်ညံ့တာပဲ။ ရှားမီးကိန်းကျတယ်။ ရှားမီးထွန်းရမယ်"
သတိပြုမိလိုက်သည်နှင့်လန့်သွားကြကာ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနှင့်ယောက်ျားလေးများကနှုတ်မဆက်ဘဲပြန်သွားသည်။ ထိုတပြိုင်နက် ထိုင်နေသောနေရာမှ
ဟု ဆူသလိုပြောသဖြင့်ကိုယ်လေးကျုံ့သွားသလိုဖြစ်၍ဆရာ့အားမရဲတရဲလှမ်းကြည့်ကာ "ဟုတ်ကဲ့" ဆိုသည့်
ဘ၀၌မေတ္တာဆိုသည်အား ပိုင်ဆိုင်ရန်စဉ်းစားနိုင်ခွင့်ရှိခဲ့လေလျှင် ရတုမြေသူလေး၏ဘ၀င်ဝယ်အမြစ်တွယ်
နေသည့် မင်းနတ်သျှင်မှ ရာဇဓာတုတစ်ဦးတည်းအပေါ်သာမေတ္တာတော်ထားခဲ့သော.....
ခွင့်မရှိသည့် "ပန်းမြတ်မဉ္စူ" တပွင့်ဖြစ်လေသော ဆရာ၏မေတ္တာကို သဇင်ဝေဆွတ်ချူပန်ဆင်ရန်ဝံ့စားနိုင်
လိမ့်မည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်ရာ အတိတ်ဘ၀သံသရာမှ ဒါနအတူမပြုခဲ့ဖူးရုံမကဆုတောင်းဆုယူတို့လွဲခဲ့ကြခြင်း
Posted by L at 3:19 PM Links to this post3comments
နောက်စာသင်နှစ်တစ်နှစ်ပြန်စချိန်သည် အဌမတန်းဖြစ်သည်ကြောင့်ရည်မှန်းချက်တို့အောင်မြင်ဖို့ ပထမ
ခြေလှမ်းဖြစ်နေ၍ မြို့နှင့်အနီးအနားရှိအလယ်တန်းကျောင်းအောင်ကြသူများရောက်လာကာ တန်းခွဲများပြီး
စာသင်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်အောင်အတွေ့နည်းသွားကြစဉ် ဆရာသည်အထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ် ဒဿမတန်း
ရိပ်ကနဲတက္ကသီလာမှကံ့ကော်တောနှင့်နီးတော့မည့်စာသင်နှစ်ရောက်ခဲ့လျှင် သိပ္ပံကျောင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့် မြို့နှင့်အနီးတ၀ိုက်သာမက ခရိုင်မြို့လေးများကတချို့ပင် ကျောင်းတော်ကြီးသို့စုရုန်းပြောင်းရွှေ့လာသူတို့ပွားများလာခြင်းကြောင့် သူငယ်ချင်းဟောင်းများလဲနည်းကုန်
သလောက် မျက်နှာစိမ်းသူငယ်ချင်းသစ်များအားအများဆုံးမြင်နေရသည့်ကြားတွင် ကြည်ကြည်လွင်နှင့်တတန်းထဲဖြစ်၍၀မ်းသာရသော်လည်း လူခံဖြစ်နေကြောင်းသိသူ၊ သူငယ်ချင်းသစ်များက
အတန်းပိုင်ဆရာမဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်မှသဇင်ဝေတို့စာသင်ခန်းရှိရာညွှန်ကြားရာ၌ "မင်းတို့ C တန်းအခန်းက အရှေ့
ဘက်အစွန်ဆုံးအပေါ်ထပ်အခန်းမှာကျတယ်။ အားလုံးသွားနှင့်ကြတော့။ တီချယ်နောက်ကမကြာခင်လာခဲ့မယ်"
ဆို၍ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာသွားရင်း အတန်းမှမြစ်ကွေ့ရှုခင်းအားတိုက်ရိုက်မြင်ရမည့်အတွက် "အတန်းရှေ့ပိုင်းပြူတင်းပေါက်ဘေးထိုင်ခုံမှာထိုင်မယ်" ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကာကြည်ကြည်လွင်ကိုခေါ်ရန်လှမ်းကြည့်လိုက်လျှင် သဇင်ဝေလိုနေရာအတွက် မစဉ်းစားသလို
ထိုင်ချင်သောနေရာကိုရအောင်ထိုင်ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း မြစ်ကွေ့ရှုခင်းအလှကိုကြည့်မိသည်တွင် အရှေ့ဘက်ကမ်းပါး၌ နေရောင်နှင့်ငွေသောင်ယံတို့တလက်လက်ဖြစ်ကာ၊ အနောက်ဘက်ကမ်းပါးမှာကျောက်
ဆောင်များနောက်တွင်စိမ်းစိမ်းစိုစိုသစ်ပင်များအပြင်၊ မြစ်ပြင်မှာလှေကလေးတချို့လှော်ခတ်နေ၍ မြစ်ယံပေါ်၌
ကျေးငှက်သာရကာတို့ပျံသန်းနေကြသည်တို့က သာယာကြည်နူးစရာမြင်ရသော်လည်း ဤနေရာကိုရွေးခဲ့ရင်း
အကြောင်းသည် သဘာဝအလှအပများအား ခုံမင်လှသကဲ့သို့ အခါအခွင့်သင့်ချိန်ကြုံပါက မြစ်ကွေ့သို့ငေးမော
ကြည်ကြည်လွင်ကိုနောက်ဆုံးတန်းတွင်မြင်၍အလှမ်းဝေးနေပြီး၊ ထိုနှစ်မှာသင်ခန်းစာများ၊အိမ်စာများပိနေသကဲ့သို့ သူငယ်ချင်းသစ်များနှင့်လုံးထွေးရစ်ပတ်လျက် တယောက်နှင့်
အလှည့်ကျအချိန်ဇယားအရ သဇင်ဝေတို့အတန်းသို့ ဆရာရောက်လာသည့်အခါ ထွေးထွေးအောင်၊
၀င်းဝင်းလင်း နှင့်သီတာထွန်းတို့အားသတိရလာ၍ ဆရာ့တပည့်ဖြစ်ရပြီကိုကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရပါ၏။
တာဝန်နှင့်ဆရာရောက်လာလျက် အတန်းရှေ့မှရပ်ကာတတန်းလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်းမှ "ဒီနေ့အတန်းမှာအသင်း
လေးသင်းဖွဲ့ရမယ်။ ကျန်စစ်သား၊ဘုရင့်နောင်၊အလောင်းဘုရားနှင့် ဗန္ဓုလအသင်းဖွဲ့ပြီးရင် အသင်းခေါင်းဆောင်
တွေလဲရွေးရမယ် " အတန်းသားများအားဆရာမှအသင်းလေသင်းဖွဲ့ရာတွင်
ပြီးသောအခါ အတော်အတန်စိမ်းနေကြသည်ဖြစ်ပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်ချင်းတဦးနှင့်တဦးအသိအမှတ်ပြုခေါင်းငြိမ့်ပြ
ကြပြီးနောက် "အသင်းဖွဲ့ပြီးရင် အသင်းခေါင်းဆောင်ရွေးရလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အသင်းကဘယ်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်
တင်မလဲဆိုတာကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြ" ဟုဆရာကဆက်လက်ပြောသောအခြေအနေ၌ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေလိုချည်းဖြစ်နေ၌ အတန်းသားအားလုံးတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လျက်အရွေးခက်
နေပြီး ခေတ္တငြိမ်သွားရင်း သွက်လက်သည့်ကျောင်းသားတချို့အပိုင်းမှ အချင်းချင်းခေါင်းဆောင်ရွေးတင်ကြပြီး
သော် သဇင်ဝေတို့အလောင်းဘုရားအသင်းအဖွဲ့မရွေးရသေးသဖြင့် ရွေးမည့်ဟန်ဖြင့်အကဲခတ်နေကြစဉ်
"အလောင်းဘုရားအသင်းခေါင်းဆောင်ကို သဇင်ဝေ့ကိုရွေးလိုက်မယ်" ဟုဆရာကအရင်ဆုံးပြောလိုက်သော
အခါ အသင်းသားအားလုံးအနည်းငယ်အံ့အားသင့်သလိုဖြစ်သွားပြီး ဆရာရွေးသည့်အတွက်လက်ခံလိုက်ကြလေ
သဇင်မလုပ်ချင်ဘူး လို့ဆရာ့ကိုစိတ်ထဲမှသာပြောရဲသည်ဖြစ်ကာ ငြိမ်နေရာမှအသင်းဖွဲ့ခြင်းကိစ္စပြီးဆုံး၍
ဆက်လက်ပြီးအသင်းဝင်၏တာဝန်တို့ရှိကြောင်းဆရာမှပြောကြားရာတွင် အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ တိုး
စိတ်မ၀င်စားဘဲသောကတို့၌နစ်မွမ်းနေကြောင်းကိုမူ မည်သူ့အားမှမပြောနိုင်သောဘ၀ဖြစ်သည်။ အတတ်နိုင်
Posted by L at 2:37 PM Links to this post3comments
အစကသူငယ်ချင်းတွေသည် သဇင်ဝေကဆရာ့အပေါ်သိလျက်နဲ့မသိကျိုးကျွန်ပြုလျက် စိမ်းကားနေသည်ဟုထင်
မြင်ခဲ့ကြစရာရှိကာ သူတို့ချစ်သောဆရာ၏နှလုံးသားကိုစာနာစွာကြိတ်၍ အကြင်နာပိုနေခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။
သဇင်ဝေမှာမူ ဆရာသည်မိမိအပေါ်ပန်းမျိုးစုံဖူးပွင့်ဝေဆာစေရန် ရေလောင်းပြုစုပျိုးထောင်နေသည့်ဥယျဉ်ထဲက
ပန်းကလေးတစ်ပွင့်အဖြစ်မှလွဲကာ အမှတ်မထင်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုသာ မှတ်ထားနေခဲ့မိ၍တကြိမ်တခါမှထူးခြား
ဤတွင် ကြည်ကြည်လွင်သည်ဝေးကျန်ခဲ့သောနှစ်တို့ကိုမေ့လျော့၍မမြိုသိပ်နိုင်တော့ဘဲ သဇင်ဝေ၏ရင်အားမြှား
လောလောဆယ် ကြည်ကြည်လွင်အားဆရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်သည်တို့ကိုပြောပြရန် အင်အားမရှိတော့
"ရပါတယ် လွင်ရယ်" ဘာဆက်ပြောရမည်မသိတော့သည်ကြောင့် ကြည်ကြည်လွင်ကအိမ်ရှေ့အထိလိုက်ပို့၍
စိတ်ကူးနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်း၊ လွမ်းဆွတ်ဖြင်းတို့၌ထုံရစ်နေတတ်သူ သဇင်ဝေအဖို့ အရင့်အရင်အခါသမယတို့၌
တာဝန်ကျရာသို့ပြန်ေ၇ာက်သည့်အခါ တောင်လေးလုံးတွင်ညနေခင်းနှင်းများဝေဆာနေပုံမှာ သဇင်ဝေတို့
သတ္တမတန်းခွဲခန်းမတွင် သဇင်ဝေတို့စုရုန်းပြီးထိုင်နေကြရချိန်မှာပဲ၊ အတန်းရှေ့တည့်တည့်မှညာဘက်
ဆယ်ကိုက်လောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပါကမြင်နေရရာ၊ အတန်းတူကျသူ့နံဘေး၌ထိုင်နေသည့် ထွေးထွေးအောင်က
ဆိုသဖြင့်ကြည့်လိုက်မိရာဝယ် ခဲသားရောင်တိုက်ပုံအားဖြူဖွေးသောလည်ကတုံးရှပ်အင်္ကျီအပေါ်ထပ်ဝတ်ထားပြီး အသားဖြူဝင်းကာအရပ်ရှည်
များနဲ့ဆရာ့အသွင်မှာအဝေးကပင်ဖြစ်သော်လည်းအထင်းသားမြင်နေရစဉ်၊ တပြိုင်ထဲလိုမိန်းခလေးတချို့လဲအကြည့်ရောက်နေကြသည်ဖြစ်ပြီး ဖူးငုံသစ်စလွင့်ဖက်ညှာဝင့်လွှာစိမ်းတထပ်ကိုခွာလှစ်လို့ လောကကိုချောင်းကြည့်စပြုနေပြီဖြစ်သော ပန်းကလေးတို့မှာ ဟိုသည်ယိမ်းနွဲ့တသွဲ့သွဲ့မခိုင့်တယိုင်စကားသီဖွဲ့မြိုင်ကြပုံကား "ပဲခူးကပြောင်းလာတဲ့
ရဲ့အထက်တန်းစာသင်ခန်းတွေထဲ တတန်းဝင်တတန်းထွက်သင်ခန်းစာပို့ချနေသူဆရာ့ကို ရှေ့တည့်တည့်
"သဇင်၊ ဟိုဘက်ဆောင်အလယ်လှေခါးအရှေ့ဘက်ဘေး ကိုးတန်း(D)ထဲသွားနေတဲ့မမတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါ
ဦး" ဟုပြောလာသဖြင့် ရှေ့တည့်တည့်လဲဖြစ်နေသောကြောင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ မျက်လုံးဝိုင်း၍နှာတံမပေါ်
အတိုင်းသားကြားလိုက်၍ ၀ိုင်းကြည့်နေကြ၏။ "အဲဒီမမက ဆရာဦးမောင်မောင်ကျော်ကိုကြိုက်နေလို့တဲ့"
" အဲဒီမမကကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် စားမေဖို့ဆိုပြီးဆရာ့ဆီအမြဲသွားတယ်တဲ့"
"အဲဒီမမက အဖွားနဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေလို့အဖွားကအိုလှနေတော့ ပြောသမျှခေါင်းငြိမ့်နေတာဘဲလို့ကြားတယ်"
ပျံ့လွင့်လာသောဆရာ့သတင်းတို့သည် "မမမေသက်နိုင်အလာများလွန်းလို့ ဆရာကခဏခဏမလာဘို့ပြော
"မြို့ကြီးမှာနေတော့ သိပ်မဝေးဘူး" အတွေးကျယ်သူဝင်းဝင်းလင်းဆိုသည့်သူငယ်ချင်းမှ "ဆရာနေတဲ့တိုက်ခန်း
ငယ်သူငယ်ချင်းများဖြစ်နေသောကြောင့် သီတာထွန်းက၀င်ပြီး "နင်ကလဲ...ဆရာကခဏခဏမလာဘို့ပြော
ကြားရသည်နှင့်အညီ နောက်ပိုင်းတွင် မေသက်နိုင်ငိုသော်လည်း "အိမ်မှာစာပြမပေးဘူး" ဆိုသော
တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ခြင်းကိုသိရသည့်အပြင် မည်သူတစုံတဦးနှင့်မှ မေတ္တာရေးရာတွင်မပတ်သက်ဘဲ
နေကြောင်းသိရသေးသည်ကြောင့် သိက္ခာဆိုသည်၌တန်ဘိုးထားတတ် အလင်းပြာကြယ်တာရာများထဲမှ ကြည်
စင်လင်းလက်လွန်သော ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ်လေးစားမြတ်နိုးခဲ့ပြီး ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်သည့်အလား
Posted by L at 9:38 AM Links to this post 1 comments
အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတို့တွင် ထွေးထွေးအောင်မှာသဇင်ဝေနေထိုင်ရာ၏အနောက်ဘက်ရပ်ကွက်၌နေပြီး ဇာတိတွင်ပင်အမြတ်ခွန်ရုံး၌ အလုပ်ဝင်သဖြင့်တခါတရံတွေ့နိုင်သေးလေသည်။
ကြည်ကြည်လွင်ကမူ ထွေးထွေးအောင်ရှိသည့်ဘက်နှင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည့်အရှေ့ဘက်ရပ်ကွက်၌နေ၍ သူနာပြုဆရာမသင်တန်းသုံးနှစ်တက်ပြီးနောက်မော်လမြိုင်တွင်တာဝန်ကျနေသောကြောင့် တခါတရံပြန်လာမှသာဆုံဖြစ်ရတော့သည်။
နှစ်ဦးလုံးဇာတိမြို့နှင့်ဝေးကွာကြသောအခါ ကြည်ကြည်လွင်ကိုမတွေ့ရသည်မှာကြာပေပြီ။ မတွေ့ရသည့်နှစ်ထက်နှစ်တို့ရှည်လျားလှသည်ဟုအောက်မေ့နေစဉ် ကြည်ကြည်လွင်ကမိသားစုထံဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်၌ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည့်အကြောင်းနှင့် သဇင်ဝေ့ကိုလည်းတွေ့ချင်ကြောင်းသိရသဖြင့် ထိုရက်များကိုရွေး၍ ခွင့်ဖြင့်ပြန်လာခဲ့သည်။
အိမ်ပြန်ရောက်လျှင်အအေးဆုံးအရိပ်အဖြစ် ချမ်းမြေ့မှုများနှင့်နားနေလိုက်ပြီး၊ ကြည်ကြည်လွင်ရောက်မည်ဖြစ်သောရက်ကိုသိထားသောကြောင့်သွားရာ၊ အိမ်ပေါ်မှအမြန်ဆင်းလာကာ လက်ဆွဲကြို၍ လှေကားပေါ်တက်ရင်း " သဇင် ဘယ်တုန်းကရောက်လဲ" ၊ " တမြန်နေ့က လွင်" ၊ " လွင်တော့ ညကရောက်တယ် "
အိမ်ပေါ်ရောက်လျှင် လွင်က "ထိုင်ဦးနော် ၊မစားရတာကြာတဲ့ လွင်တို့မြို့ကမုံ့ဟင်းခါးချက်ထားတယ် ဟင်းရည်သွားနွှေးလိုက်ဦးမယ် " လွင်ကပြောပြောဆိုဆိုမီးဖိုခန်းဘက်ထွက်သွားစဉ် နောက်မှလိုက်သွားလျှက် " လွင်ကလဲ သဇင်တယောက်ထဲထိုင်စောင့်မနေချင်ပါဘူး ၊ ပဲသီးတို့ဘာတို့လှီးစရာရှိ၇င်ကူပေးမယ်"
ကူစရာမလိုတော့သည့်အတိုင်း စားပွဲပေါ်မှာ လှီးပြီးသားပဲတောင့်ရှည်သီးတစ်ပန်းကန်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်ကန်းကန်၊နံနံပင်၊ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊သံပုရာသီး၊ဆန်လှော်မှုန့်နှင့် ငရုပ်သီးမှုန့်တို့အပြည့်အစုံရှိနေလေသည်။
သဇင်က " ဒေါ်လေးတို့တော့ဥပုသ်နေ့မဟုတ်လို့ဈေးထွက်နေကြမှာပေါ့နော် "
" ဟုတ်တယ်၊ ညနေမှလူစုံမယ်လေ"
" အင်း...အခုချိန်ကတော့ လွင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲကကောင်းပါတယ်။ သဇင်လဲတောင်လေးလုံးကိုပြန်ရင် ဒေါ်လေးတို့ဆိုင်က ဂျင်းလ္ဘက် ပဲလှော်တွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့အမြဲသွားဝယ်နေတော့ ဒေါ်လေးနဲ့ကအမြဲတွေ့နေပါတယ်"
" အဲဒါတွေကတန်ဖိုးမကြီးပေမယ့် ပေးရတာမျက်နှာပန်းလှတယ်နော်"
" ဟုတ်တယ်လွင်ရဲ့၊ လက်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်းနောက်လဲပေးပါဦးတဲ့လေ။ အားမနာကြဘူး " ဟု သဇင်ဝေကဌာနကလူတွေကို နောက်ကွယ်၌အရွှန်းဖောက်ရာ ကြည်ကြည်လွင်ကတခိခိရယ်ပြီး
" လွင်လဲ မော်လမြိုင်ပြန်တိုင်း အဲဒါတွေဘဲယူသွားတာ၊ ရွှေချဉ်ပေါင်တုံးကာမှလို့မပြောကြတဲ့အပြင် အဲဒါတွေပဲမှာနေကြတာလေ။ ဒီတနယ်လုံးအလှူအတွက်ကအစ လာလာဝယ်နေကြတော့ ဆိုင်ကလက်မလယ်ဘူး။ အဓိကကတော့ ပဲလှော်ထုပ်တွေရောင်းအရဆုံးပဲ"
"ရောင်းကောင်းတာမပြောနဲ့လေ ပဲလှော်က၀ါးလိုက်ရင်ရွရွမွမွလေး လွင်ရဲ့"
"ဒါဆိုအားမနာနဲ့ အားရပါးရစားနော် သဇင်"
"ဟုတ်ပါရဲ့လွင်ရယ်၊တောင်ငူဘက်ရောက်ဖူးတဲ့လူတွေက ဒီမြို့မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်နဲ့ဆန်လှော်မှုန့်ကိုအထူးအဆန်းဖြစ်ပြီး စားလို့ကောင်းလွန်းလို့တဲ့"
"အင်းဟုတ်တယ်၊ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်ကငါးအသားတွေချည်းနဲ့ချက်ထားပြီး၊ဟင်းရည်ထဲကိုပဲမှုန့်တို့ ဆန်မှုန့်တို့လုံးဝမထည့်ဘဲ၊ မုန့်ပွဲပြင်ပြီးမှဆန်လှော်မှုန့်သက်သက်ထည့်စားရတာတမျိုးကောင်းနေလို့တဲ့ ။ နောက်ပြီး ဆန်လှော်မှုန့်ကလဲဆန်နဲ့ပေါက်ပေါက်ပွင့်လှော်ထားတာဖြစ်တော့ဖွေးရွပြီးမွှေးနေတာပဲလေ။ တခြားမြို့တွေမှာအဲဒီဆန်လှော်မှုန့်မရလို့ချက်မစားနိုင်ဘူးနော်"
နှစ်ယောက်သားစား၍အတော်ဝလာသလိုဖြစ်လျှင် ကြည်ကြည်လွင်သည် သဇင်ဝေ့ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရင်း "သဇင်လဲအသားတွေဖြူပြီးဝလာတော့ ပိုလှလာတယ်"
"မြှောက်ပြောတမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကထဲကမေမေကဆို သဇင့်ကလှလဲလှ ချစ်စရာလဲကောင်းတယ်လို့ ခဏခဏပြောနေသားပဲ"
လွင်ရဲ့မိခင်သည်အလှအပအလွန်ကြိုက်၍ပွင့်လင်းလှစွာပြောတတ်လေ့ရှိသဖြင့်စောဒကမတက်တော့ဘဲ "လွင်လဲလှပါတယ်၊ ဒေါ်လေးကကိုယ့်သမီးမို့မပြောတာနေမှာပါ"
ကြည်ကြည်လွင်လှသည်မှာအမှန်ဖြစ်သလို၊ မိန်းမပျိုလေးတိုင်း နှင်းဆီ စံပါယ် ချယ်ရီ ခွာညိုနှင့်ခရေ ပန်းအလှတို့လိုပင် အလှတမျိုးစီပိုင်ဆိုင်နေကြရာဝယ် တန်ချူရှင်သည်မည်သည့်ပန်းအား ခူးဆွတ်လိုသည်ကသာပဓာနကျပါသည်။
"ကဲ...ဒီလိုဆို ကျေနပ်ပြီထားပါတော့သဇင်ရယ်...ဒါနဲ့..တောင်လေးလုံးဆိုတာဘယ်နားမှာလဲ။ လွင်တော့တခါမှမကြားဖူးပါဘူး "
"ဟုတ်တယ်...ဝေးလဲဝေး မိုးတွင်းဆိုရင်မိုးစွေတတ်တဲ့အခါတွေမှာချမ်းချမ်းနဲ့ကွေးရင်းလွမ်းလွမ်းနဲ့တွေးပြီး အိပ်နေရတော့တယ်"
သဇင်ဝေ့အပြောတွင် ကြည်ကြည်လွင်ကခပ်တွေတွေစဉ်းစားနေရင်းငိုင်သွားရာမှ ရုတ်တရက် "သဇင်၊ ဆရာဦးမောင်မောင်ကျော်ကိုသတိရသေးရဲ့လား" ဆိုသည့်အမေး၌ မေးရိုးမေးစဉ်နဲ့မတူဘဲ အမည်နာမနှင့်တကွကွက်၍အထူးပြုမေးပုံအားလှစ်ခနဲသံသယ၀င်သော်လည်း ဘာကြောင့်ဟုထင်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကြောင့် အမှန်အတိုင်းပင် "သတိရတယ်လေ။ ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကိုသတိရတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲလွင်"
ကြည်ကြည်လွင်ကသဇင်ဝေ၏အဖြေနဲ့အမေးကိုသဘောမကျပုံမျိုးနှင့်ခေါင်းယမ်းနေရာမှ "မဟုတ်ဘူးလေ။ဆရာက သဇင့်ကိုသိပ်ချစ်တာ"ထိုစကားမျိုးမဟုတ်ဘဲ
"ဆရာကသဇင့်ကိုချစ်နေတဲ့ဆရာမဟုတ်လား" ဆိုလျှင်ပင် လုံးဝမထင်မှတ်မရိပ်မိခဲ့သူ သဇင်ဝေတုန်လှုပ်သွားလိမ့်ဦးမည်ဖြစ်သေး၍ ပိုလေးနက်စွာဆရာ၏မေတ္တာသင်္ကေတတို့များပြားကြောင်းဖြစ်သော 'သိပ်' ဟူသည့်စကားတလုံးအတွက် သဇင်ဝေတုန်လှုပ်သွားရုံမကချောက်ခြားသွားပြီး ဦးနှောက်တွင်းသွေးများတဒိန်းဒိန်းတိုးဝင်လာကာ ရင်ဝယ်ငလျင်လှိုင်းတံပိုးများအပြင်းအထန်လှုပ်သွားသည့်အလား မူးဝေသွားရလေသည်ကိုထိန်းလျှက်၊ နားနဲ့ဆတ်ဆတ်ကြားရပါလျှက်မယုံရဲသဖြင့် "ဆရာက သဇင့်ကိုသိပ်ချစ်တာ..ဟုတ်လား...လွင်" ဟုဆိုကာအယောင်ယောင်အမှားမှားပြန်မေးနေမိခြင်းအား ကြည်ကြည်လွင်ပင်တအံ့တသြဖြစ်သွားသလို
တဖန် ကြည်ကြည်လွင်မှာလဲ မယုံနိုင်ပုံနဲ့ "မသိဘူး ! ဟုတ်လား...သဇင်" ဟုထပ်ပြီးပြန်မေးနေသည်၌ လှိုက်တက်တစ်ဆို့လာသောဝေဒနာများ အခံရသက်သာချင်သည့်အတွက် ကြည်ကြည်လွင်တစ်ဦးထဲအမြင်သာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု တွေး၍
"သိတယ်လေ...သူငယ်ချင်းတွေအကုန်သိတယ်" ကြည်ကြည်လွင့်စကားများတွင် 'ဟုတ်တယ်လေ' 'သိတယ်လေ' ဆိုသောရင်မောကာဆွဲဆွဲငင်ငင်ပြောနေသည့်အခါ မယုံနိုင်ခြင်းဟူသမျှတို့အား အခိုင်အမာချေဖျက်လိုက်သည်ဖြစ်သဖြင့် တနင့်တပိုးခံစားသွားရခြင်းကြောင့် မျက်နှာဖြူရော်လာကာ ကုလားထိုင်ကိုခွေမှီနေသောပုံ မြင်ရမှကြည်ကြည်လွင်မှာ သဘောပေါက်သွားသကဲ့သို့ ခေါင်းညိမ့်လိုက်ခေါင်းခါလိုက် ဖြစ်နေတော့၏။
Posted by L at 12:10 PM Links to this post 1 comments
နေကြာတစ်မှုံ ၊ ဂျုံနှံတစ်အာ
နေကြာဝါ၀င်း ၊ ဂျုံနံ့သင်းနှင့်
ပြောင်းကတစ်ဖူး ၊ လူးကတစ်နှံ
နဘူးတစ်ချုံ ၊ ဆူးတစ်ချုံမှာ
ယာတစ်ကွက်ခြား ၊ နှစ်ကွက်ခြားလျင်
ပိုင်းခြားကန့်ကန့် ၊ ယာကိုသန့်။
ဟိုရုံသည်ရုံ ၊ ယာစပ်ရုံကာ
ခိုလှုံယာငွေ့ ၊ ရင်ခွင်မွေ့။
ပဲစိုက်တိုင်ထောင် ၊ သီးမျိုးအောင် ။
ကင်းပုံ သခွား ၊ သီးမျိုးထွား။
တို့ယာမြေကြော ၊ စာရေပေါလည်း
တို့တောဘ၀ ၊ ယာအလှကို
တို့က မေ့ပြီ ဆိုမှဖြင့်.......။
ယာမေ့ ရွာမေ့ ၊ မြို့ကိုမေ့
ပြည်မေ့ ထိုကျိုး ၊အဖြစ်ဆိုး
အမျိုးဘယ်မှာ ၊ခိုင်တော့အံ့ ......။ ။
Posted by L at 5:13 PM Links to this post3comments
ဘလော့စာမျက်နှာတွေကို ရအောင် မဖမ်းယူနိုင်သည့် ကျွန်မ၏ မကျွမ်းကျင်သော
အချိန်များများတွင် အာရုံစိုက်ရသော ကျွန်မ၏ အလုပ်တာဝန်တို့ကြောင့်….
အရင်က အင်တာနက်မှ တဆင့် အိုးဝေ အိုးဝေမှတဆင့် ကျွန်မသွားခဲ့ဖူးသော
ရသ၊ဗဟုသုတပေးရာ…..များစွာသော ဘလော့စာမျက်နှာတို့ကို မြင်ယောင်တိုင်း
ပြန်မရနိုင်သေးသော အိပ်မက်ချိုတို့အတွက် ကျွန်မပူလောင်ခံစားရ၏။
ဖတ်ချင်စိတ်က မခံနိုင်အောင် နှိပ်စက်တတ်၏။
လက်တွေ့မှာ ကိုယ်ရေးသော စာမျက်နှာကိုပင် မြင်ခွင့်မရ။
သွားနေကြ ဘလော့များတွင်လည်း E mail မှတစ်ဆင့် ဖတ်လိုကြောင်းမချိတ်ခဲ့ရ။
ဒီစာရေးရင်း ကျွန်မ၏ moonbright2007@gmail.com သို့ ကျွန်မအား
ဖတ်စေချင်သော ဘလော့ပို့စ် များပို့ပေးရန် အိုးဝေ၏မိတ်ဆွေဘလော့ဂါများကို
ကျွန်မ ရေးဖြစ်သော စာများကိုလည်း ညီမလေးမှတဆင့် အိုးဝေတွင် ဆက်လက်တင်သွားပါမည်။
အဖိုးတန်စာပေလင်္ကာ ရတနာများ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ…
ပျို့  တောလား
တွေ့သမျှ ခူး ။ ။
Posted by L at 5:32 PM Links to this post5comments
ဒီအိုးဝေကို လာဖတ်ကြသောအပေါင်းအသင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ဒီအိုးဝေမှာ ကဗျာတွေချည်းဖတ်နေရတာငြီးငွေ့နေမှာစိုးတဲ့အတွက် ခံစားမှုရသ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုတတ်နိုင်သလောက် ကြိုးကြိုးစားစားရေးဖွဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်...
'' ပန်းမြတ်မဉ္စူ ''
ယမုံနာပေါင်းလောင်းစစ်တောင်းမြစ်ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသော နဒီမြစ်ဝှမ်းတွင် အလွမ်းရတုဘုရင် မင်းနတ်သျှင် စိုးမိုးပိုင်သခဲ့ဖူးသည့် ကေတုမတီမြို့သည်သဇင်ဝေ၏ဇာတိမြို့။
အခြေအနေအရဇာတိမြို့တွင်အလျဉ်းသင့်သလိုအလုပ်ဝင်ခဲ့ရာ အကျဉ်းဦးစီးဌာန၌တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းမှ အဝေးသင်ဖြေပြီးနောက်၊ နှစ်မကြာမီတောင်လေးလုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရ၍၊ အဝေးမှလွမ်းတိုင်းဇာတိမြေသို့ ခွင့်ယူကာ ခဏခဏမပြန်နိုင်သည့်တိုင်အောင်၊သဇင်ဝေကတနှစ်တခါပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်သည်။
ဖြစ်နိုင်ရင် တနှစ်တွင်နှစ်ခါလောက်ပြန်မှ၊အလွမ်းသက်သာမှာဖြစ်ပေမယ့် သည်းခံနေရလေသည်။
သဇင်ဝေ၌လွမ်းစရာတို့များလှပါ၏၊အစ်ကိုနှင့်မောင်ငယ်လည်း အဝေးတွင်တာဝန်ကိုယ်စီဖြစ်ပြီး၊နာတာရှည်ဖြစ်လာသူဖခင်အား စောင့်ကြည့်ပြုစုနေရလျက်..သူတကာထက်အကြင်နာပိုသူမိခင်ကြီးစောင့်စားနေရာမြို့၊ထီးမွေနန်းမွေအဖြစ် ကြွင်းကျန်ရစ်သည့်ကျုံးလေးတန်ထဲမှ တစ်တန်သာပဲမြစိမ်းရောင်ရေကြည်တို့အခါမလပ်ပြည့်လျှမ်းလျက် ညှင်းလေပြေသုတ်ဖြူးနေတတ်သောကျုံးကလေး၊ အဲဒီကျုံးကလေးအနီးမှာကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့လေရာဖြစ်သည့်အတွက
်ရင်ထဲဝင်တတ်စပြုတဲ့အရွယ်ကစတင်လို့ စိတ်ကူးထဲကကျုံးကလေးကိုမြရည်နန္ဒာဆိုပြီး အမည်ပေးခဲ့လေတော့ကျုံးကလေးကလဲကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေဘိအလား လျှောက်လှမ်းသွားစဉ်တွေမှာ မြစိမ်းရောင်ပိုမိုလဲ့နေသလိုမြင်ရသောကျုံးကလေး မြရည်နန္ဒာ၊
သူ့ပသာဒရှိကြတဲ့အထဲက အမှတ်စဉ်(၁)၊အ.ထ.ကကျောင်းတော်ကြီးအားဗိသုကာရှင်များစိတ်ကူးယဉ်လျက် ပေါင်းလောင်းမြစ်နဒီ စစ်တောင်းမြစ်အကွေ့ကမ်းနဖူးထိပ်မှာမှ တမင်ရွေးချယ်တည်ဆောက်ခဲ့လေသည့်အလား ဥတုသုံးလီတွင်သုံးပန်လှရှုခင်းတွေနဲ့သာယာကြည်နူးဖွယ်မြင်ခဲ့ရလေသူတိုင်း ပြန်လည်မြင်ယောင်လွမ်းဆွတ်စေမယ့် ကျောင်းတော်ကြီး၊
တနေ့လုံးလိုဘ၀ခရီးကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်မယ့် ပညာများအား တဆင့်စီမြှင့်တင်ပေးဝေခဲ့လေသူ
ဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းတော်ကြီးရှိ ပင်မအဆောင်ကြီးသုံးဆောင်အပါအ၀င် အဆောက်အအုံငယ်လေးများထဲ၌တလှည့်စီရောက်ခါတမိုးတယံထဲအောက်တွင် အခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့်ဘာသာရပ်အစုံစုံတို့ အတူသင်ယူနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ကြောင့် သဇင်ဝေလိုတွယ်တာတတ်သူများအဖို့ မည်သည့်ပြိုင်ဘက်မှမဟုတ်ဘဲ၊မောင်နှမညီမများသဖွယ်တူသည့်သူငယ်ချင်းများ။
သို့တစေလည်း ကိုယ်စီဘ၀အကြောင်းများအရ သူငယ်ချင်းအတော်များများကိုမတွေ့တော့၊ ဇာတိမြို့ကပြောင်းရွှေ့များသူများအပြင် မိဘများအလုပ်တာဝန်ကျ၍နှစ်အနည်းငယ်နေထိုင်ပြီး၊ အခြားတာဝန်ကျရာမြို့များသို့လိုက်ပါသွားရသူသူငယ်ချင်းများရှိရာ၊ တတန်းတည်းနေကာတခင်တမင်ရှိခဲ့သောသူငယ်ချင်းများကိုလဲ ရံဖန်ရံခါသတိရနေမိသည်။
Posted by L at 5:30 AM Links to this post0comments
Posted by L at 5:13 AM Links to this post0comments
Posted by L at 5:06 AM Links to this post0comments
မေ့ မတတ်နိုင် ။
Posted by L at 2:29 PM Links to this post3comments
ဆောင်းလဆည်းဆာပုံရိပ်များ ။ ။
Posted by မေအောင် at 7:19 PM Links to this post5comments
တူ၏ ထင်၍၊ ရွှင်ရင်းပျော်ရင်း၊
Posted by မေအောင် at 7:54 PM Links to this post2comments
မင်္ဂလာအတိ သာယာဘိမို့ ၊
မောပြေရန်မှာ၊ ဝတီံသာတွင်၊
ရွေ့ကပြယ်လျား၊ နဂါး ကျားတွေ၊
Posted by မေအောင် at 5:15 PM Links to this post 1 comments
“ နေရာမဲ့ ”
အော်! လှမ်းယူဖို့ဝေးးးး။
Posted by မေအောင် at 6:36 PM Links to this post 1 comments
Posted by မေအောင် at 2:22 PM Links to this post5comments
အင်ကြင်း သန္တာနီက
ယှက်ပျံချီ ကမ္ဗလာနီ စို့
မခို့တရို့  သစ်သစ်လွင်။
မယူတုံ လမ်းဆုံပစ်ချင် ရဲ့
တွက် ဆ ပြစ်မယူ
Posted by မေအောင် at 9:12 PM Links to this post4comments
ကျွန်တော်တို့ ဂျပန်ကပြန်ရောက်တော့ စုမိလာတဲ့ ငွေလေးနဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ရှယ်ယာမိတ္တူဆိုင် ဖွင့် ပါတယ်။ မိတ္တူဆိုင်မှာ စက်ပစ္စည်း တွေက အကုန်လုံး ဂျပန်ပစ္စည်း အကောင်းစား တွေချည်းပါ။ တိုက်ခန်းကို ဆေးရောင်ကောင်းကောင်း (ဂျပန်စတိုင်) သ,ပြီး ၊စက်တွေကို အကျအန နေရာချ ပြင်ဆင် ထားပါတယ်။
ဆိုင်မှာလုပ်ဖို့ လူရှာရမယ်ဆိုတော့ ၃ယောက်သား တိုင်ပင်ပြီး သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်လိုက်တယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာ လျှောက်ထားသူတွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ အလုပ်ခေါ်စာကိုလည်း ထင်ထင်ရှားရှား ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခက်တာက ၃ရက်ကြာတဲ့ထိ ဘယ်သူမှ အလုပ်လျှောက် မလာပါ ဘူး။ ၃-ယောက်သား ဦးနှောက် ခြောက်နေရတယ်။ ၅-ရက်မြောက်နေ့မှာ တော့ လျှောက်သူ ဦးရေ ၃-ဦးရှိလာလို့ ကျွန်တော်တို့ အင်တာဗျူးထိုင်ကြရတယ်။
အင်တာဗျူးခန်းမက မီးဖိုချောင်ထဲမှာပါ။ သူငယ်ချင်းနှစ်က မဆေးရသေးတဲ့ ပန်းကန်ပုံကို ကြောင်အိမ်ဘက် တွန်းရွှေ့ရင်း “ ဘယ်သူ့ မီးဖိုချောင်လဲကွ ဒီလောက်ညစ်ပတ်လို့ ဟင်း” မကျေမနပ် တောက်ခေါက် လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘေစင်ထဲမှာ အိုင်နေတဲ့ ရေညစ်တွေကို ကြည့်ရင်း “ငါလဲ ဘယ်သိပါ့မလဲကွ ”ဟု ပြန်ပြီး ဘုတောလိုက်ရ၏။
အခန်းအတွင်းရှိ ဆက်တီပေါ်တွင် အမျိုးသမီးခန့်ခန့်ကြီး တစ်ဦးနှင့် လူရွယ်တစ်ဦးက ထိုင်နေပြီး ကျန်နှစ်ဦး မှာ သူတို့ နောက်နားတွင် ရပ် ၍ စောင့်လျက်။
ကျွန်တော်တို့ ၃-ယောက်လည်း သူတို့ရှေ့နားရှိတဲ့ ဆေးရုံတွင် လူနာစောင့်များထိုင်ရန် ချထား လေ့ရှိ သောခုံတန်း ရှည်ပေါ်မှာ နေရာယူလိုက်ကြတယ်။ ကဲ အလုပ်လျှောက်လာသူတွေကို ဘယ်သူအရင် စနှုတ်ဆက်မလဲ လို့ အရိပ်အကဲနဲ့ သုံးယောက်သားတိုင်ပင်ပြီး ဆုနဲ့ နက်ကတိုင် အကျအနဝတ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးကို တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းသုံးရဲ့ နိဒါန်းပျိုး နှုတ်ဆက်သံပါ။
အလုပ်လျှောက်လာသူ သုံးယောက်ထဲက ကျွန်တော်တို့ကို ကျောပေးထား တဲ့လူက “အလကား သိပါ့မလားဗျ” လို့ အော်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးကို လက်တို့ပြီး ပဲကုလားဟင်းနေမှာပေါ့ကွာ ဒီလောက် မဆလာနံ့တွေထွက်နေတာ လို့ ကျိတ်ပြီးတိုးတိုးလေး ဖြေပေး လိုက်ရတယ်။
ကျေနပ်သွားဟန်တူတဲ့ သူငယ်ချင်းက နက်ကတိုင်ကို နည်းနည်းပြန်ဆွဲပြီး
“အဟမ်း အင်တာဗျူးစ မယ်”
ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ဘက် လှည့်ပြီး ဘာမေးရမလဲ မသိဘူး ဟု တိုးတိုးမေး၏။ ကျွန်တော်က နာမည် အရင် မေးလိုက်ဟု တိုးတိုးပြန်ပြောလိုက်၏။သူငယ်ချင်းသုံး ဒုတိယအကြိမ် အဟမ်း ခိုက်
သူ့ အကြောင်းများကို တသီကြီး ပြောပြသွား၏။ သူ့ဘေးမှ အမျိုးသမီးကြီးက “ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ကျွန်မ သားက ဆေးကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ခဲ့တာ။ ခုဘွဲ့လွန် ဆက်တက် မှာလေ” ဟု ရုပ်ရှင်မင်းသား လူပျိုတွေ အင်တာဗျူး လုပ်လျင် ဝင်ရောက်ပြောဆိုလေ့ ရှိသော မိခင်ကြီးများ လေသံ အမူအယာနှင့် ဝင်ပြောလေသတည်း။
ကျွန်တော်လည်း အံ့သြပြီး ဖြည့်ထားသော လျှောက်လွှာများကို ကြည့်လိုက်၏။ ထိုဆရာဝန်လောင်း အား ပညာအရည်အချင်းအရတော့ အလုပ်မခန့်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဟု သုံးယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင် မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။
ကျန်လူ နှစ်ယောက်မှာ ဟိုကောင်တော့ ကျိန်းသေ အလုပ်ရတော့မည်ဟု တွေးပြီး အားမရှိသော မျက်နှာလေးတွေနှင့် ဖြစ်နေ၏။
“ဒါနဲ့ မင်းနာမည်က ဘယ်သူ”
ကျွန်တော် ဆေးကျောင်းသားကို မေးလိုက်၏။
ဆေးကျောင်းသားက ကျွန်တော်ကို မိုက်ကန်းကန်း စွေကြည့်ပြီး
“သူဌေးကို ဖြေပြီးပြီလေ..ခင်ဗျား မကြားလိုက်ဘူးလား။ ထပ်မမေးနဲ့ ဒါပဲ”ဟု စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး ဖြေလေ၏။
အလို ဆေးကျောင်းသားမျက်နှာတွင် ပတ်တီးတွေ ကွက်ကြားစီးထားပါရောလားးးးးး
ဤတွင် မနေ့ညက မက်သော တစ်ခန်းရပ် အိပ်မက်ကြီး ပြီးဆုံးသွားလေ၏။
Posted by မေအောင် at 4:14 PM Links to this post6comments
နွေကျောင်းပိတ်ရက် ရောက်၍ အဖေရွာသွားမည့် အသံကြားလျင် အပျော်ဆုံးက ကျွန်မဖြစ်၏။
အဖေက ခေါ် မခေါ်မသိသေး။ ကျွန်မက အိတ် တပြင်ပြင်လုပ်၏။ ကြာတော့လည်း သနားလာပြီး အဖေက လိုက်ခွင့်ပြုသည်ပင်။ မုံရွာရောက်အောင် ကားက ၃နာရီလောက် အရင် စီးရသေးသည်။ မုံရွာရောက်လျင် တစ်ည (သို့) နှစ်ညအိပ်မျှ မုံရွာတွင် ဘုရားဖူး ၊ အမျိုးတွေအိမ် လျှောက်လည်ရပြီး နောက်နေ့ နံနက်စောစောမှ ရွာသို့အရောက်သွားကြမြဲ။ မုံရွာမှ ကား နာရီဝက်စီး မြင်လှည်း နာရီဝက်စီး၊ ကူးတို့လှေ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်စီး ၊လမ်း နာရီဝက်လောက် လျှောက်ပြီးသောအခါ ရောက်လေသော ရွာကလေးမှာ အဖေ၏ ချက်မြုပ်၊ (ယခုတော့ ခေါင်းချသွားရာ) ဇာတိ ရွာကလေးပင်။
“ဟော မြို့သူပါလာတယ်ဟေ့၊ အရပ်ကတော့ တနှစ်ကနဲ့ သိပ်မကွာလှပါလား ၊ လာ လာ ဟန်ကျသဟေ့၊ ကိုကြီး မင်းကလည်း မနှစ်ကဘာဖြစ်ရတာလဲ။ မင့်မေကလွှားမှပဲ ငါ့တို့ဖြင့် မျှော်လိုက်ရတာ” တူမ ကျွန်မကို မြို့သူဟု ခေါ်သော အဖေညီ လေးလေးကြီး၏ ဆီးကြို နှုတ်ဆက် ဆဲသံကို ကြားရလေ၏။( နှုတ်ဆက်ဆဲ၊ ဝမ်းသာဆဲ ..ဆဲ ဆဲ၊ ဘာပဲပြောပြော ဆဲပါသည်။ အဆဲမပါလျင် စကားဖြောင့်အောင် မပြောတတ်သည်မှာ ကျွန်မတို့ ရွာဓလေ့ ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်)
ရွာရောက်လျင် ခဏနားပြီးသည်နှင့် အစ်မကြီးလက်ရာ ထမင်းဝိုင်းက အဆင်သင့် ။ ချက်ပြီးသည့် ပုံမှန် ဟင်းအပြင် ကျွန်မတို့ရောက်သည်နှင့် ငါးသေတ္တာ သို့မဟုတ် (လေးခွနှင့် ပစ်လိုက်သော ) ကြက်သားဟင်းတစ်ခွက် ထပ်ဖြည့်လိုက်မြဲ။ အစကတော့ ကြက်သားဟင်းလည်း ကျွန်မက စားကောင်းကောင်းနှင့် စားပါသည်။ နောက်သိတတ်လာတော့ မစားဖြစ်တော့။ (ကျွန်မကကြက်တွေ မွေးထားသည်ကိုး)။
ယခုထိ ကျွန်မမှတ်မိနေသော ဟင်းများမှာ
ဥသျှစ်ရွက်ဟင်းချို၊ ဝက်သားချက်၊ငါးပိကြော် ၊ သံပုရာသီးအတို့
မန်ကျီးရွက်ထောင်း၊ ငါးသေတ္တာကြော်၊ ပဲဟင်း၊။
ဂွေးတောက်ရွက်ဟင်း၊ ငါးပိကြော်၊ ကြက်သားချက်၊ပဲကြော်။
ပန်ထွေဖျော်၊ ငါးကြော်၊ ပဲနှပ်။
ငါးခြောက်ကြော်၊ခရမ်းသီးချက်၊ သရက်သီးသနပ်၊ ပဲဟင်း။
ငါးပိကြော်၊ ကြက်သားချက် ၊ကုလားပဲဟင်းချိုပြစ်ပြစ်နှင့် ခံသီးဆားရည်စိမ် တို့ ဖြစ်၏။
ကြက်သွန်ဖြူများများ၊ ငါးခြောက်မှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်သေးသေး၊ ငါးပိနှင့် ငရုပ်သီးမှုန့်ကို ဆီစိုစို နှင့်ကြော် ထားသော ငါးပိကြော်မှာ မီးဖိုစားပွဲအုပ်ဆောင်း အောက်တွင်၊ နေ့တိုင်းရှိသော ဟင်းအမယ် ဖြစ်၏။ နှစ်ရက်တစ်ခါ သုံးရက်တစ်ခါ ကြော်ထားရသော ထိုဟင်းကို….အငံကြော်..ဟုခေါ်တွင်လေ၏။
ဒို့မှာ (xx)ထဲမှ အဝတ်ကောင်းလဲ မလိုဘူး၊ ဖဲ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်ပွဲလဲ ငွေကုန်မရှိဘူး။ တောအလုပ် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတာ၊ အစားကတော့ ကောင်းကောင်းစားရမကွာ။ (xx= ဆဲသံ)
ဟုပြောလေ့ရှိသော လေးလေး၏ အဆိုမှာ တကယ်တော့ မှန်လှ၏။ အလုပ်ပန်း အစားပန်းဆိုလျင်လည်း တောင်သူအလုပ်က သက်ဆိုးမရှည်နိုင်။
ကိုင်းထွက် မြေပဲ နှမ်းတို့မှ ဆီရသည်။ ခြံထဲမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ထားသည်.။ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ ငရုပ်၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီဝါပြာ၊ ယာကထွက်သည်။ ကြက်သားအုပ်မတွေ မွေးထားသည်၊ ။ ဝယ်ရသည်မှာ ၊ဆန်၊ ငါးခြောက် ပုဇွန်ခြောက်၊ငါးပိမျှသာ။
ကျွန်မသည် ကျွန်မရှေ့မှ ထမင်းပန်းကန်ကို မစားဖြစ်သေးပဲ ငေးနေ တွေးနေမိ၏။
ရွာကလေးသို့ မရောက်ဖြစ်တော့သည်မှာ ၁၀နှစ်နီးပါးရှိလေပြီ။
အလုပ်ပန်း အစားပန်းဆိုလျင် သက်ဆိုးမရှည်နိုင်သော တောင်သူလုပ်သားတို့၏ နေတိုင်စားသောက်မှု့တို့ ဟိုတုန်းကနှင့် တူနိုင်ပါဦးမည်လား၊ မည်သို့ကွာခြားလာနိုင်သနည်း…စသည်ဖြင့်……….
တောင်သူတွေ ကျပ်တည်းရှာကြတယ်…ဆိုသော သတင်းစကား၏ အခြေတွင်
တိုးတက်လှသော ကမ္ဘာရွာကြီးထဲက အိမ်လေးတစ်အိမ်ဖြစ်သည့် ကျွန်မတို့ရွာကလေး၏ အခြေအနေမှန် က ရော မည်သို့ ရှိပါလေစ။
Posted by မေအောင် at 1:22 PM Links to this post 12 comments
Posted by မေအောင် at 7:36 PM Links to this post7comments
သူနှင့် သူသာ နှိုင်း စရာဟု
ဘယ်မမေ့ ။ ။
Posted by မေအောင် at 1:24 PM Links to this post4comments
Posted by မေအောင် at 8:08 PM Links to this post3comments
ကျွန်မတို့ အားလုံး (o-way contributors) များသည် အိုးဝေ ဘလော့လေးအား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိ၏။ သို့သော်လည်း တာဝန်တစ်ဖက်နှင့် မအားလပ် မှု့ကြောင့် အချို့သူများမှာ စာမရေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအား မြင့်မားသည့် နိနိမောင်နှံ သည်လည်း သူတို့၏ အိမ်သစ်လေးကို မွမ်းမံ ပြင်ဆင်ရင်း အိုးဝေဘက်ကို မလှည့် နိုင်ရှာကြပေ။ ဒီတော့ ဘာတာဝန်မှ ကြီးကြီးမားမားမရှိ ၊ အိမ်သစ်လည်း မပိုင်ဆိုင်သေးသော ကျွန်မမေအောင် တစ်ယောက်မှာ အသစ်မတင်သော အိုးဝေလေးကို ထိုင်ကြည့်ရင်း စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေရလေသည်(တကယ်ပါ….)။
ရေးမယ် ကြံလိုက် ပြန်တော့လည်း ဘာရေးရမှန်းမသိ၊ ဘလော့တွေ လိုက်လည်မိတော့ သူတို့အရေးအသား အတွေးအခေါ်တွေကို သဘောကျ ၊အားကျကာ ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ နွမ်းလျမိ၏။
မမခင်ဦးမေလို ဟာသထိထိမိမိလည်း ရေးတတ်ချင်သည်။ ရင်ထဲမှာက ဟာသ အပြည့်ရှိသည် (ဒါကြောင့် မမ အရေးကို အားရပါးရ ရီသည်)၊ ရေးက မရေးတတ်ပြန်ပေ။
sonata-cantata က လို အတွေးအမြင်ကောင်းတွေ ကို သုံးသပ်တင်ပြချင်သည်။ (ဘယ်အရာကိုမှ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ မမြင်တတ်တော့ သီတာဧရာလို စာကောင်းတွေလည်း ထွက်မလာနိုင်ခဲ့။)
ကိုကြီးဝီ လို ကျွန်မလည်း အတွေးသမားဖြစ်၏။ သို့သော် ကိုကြီးဝီ လို အတွေးနှင့် အရေး တစ်ထပ်တည်း မကျလာပေ (ကြိုးစားရေးကြည့်ဖူးပါ၏။)
slip လို ကျွန်မလုပ်နေသည့် အတတ်ပညာပိုင်းကလည်း မရှိတော့ မျှဝေရန်လည်း မစွမ်းသာ။
အစ်မ မိုးချိုသင်း၏ စာတွေဖတ်ပြီးတော့ ရသစုံ ခံစားသည်။ ရသစာပေတွင် တစ်ချိန်ကတည်းက အားကျခဲ့ရသူမို့ လင့်ခ်ရသည့် နေ့မှ စပြီး မှန်မှန်ဖတ်၏။ ဖတ်တိုင်း (အင်း တစ်နေ့ကျလျင်တော့ ငါလည်းပဲ……)။ ပြီးတော့လည်း မနေ့က ကျွန်မရယ် မနှစ်က ကျွန်မရယ် ဒီနေ့ ကျွန်မရယ် အတူတူပဲ ဖြစ်နေသေး၏။
အဲလိုပဲ အခြား ဘလော့ဂါ မောင်နှစ်မများ (..အကယ်ဒမီ ဘလော့များမှအစ တန်ခူး မမနုစံ sin dan lar, May moe, Heartmuseum , A Linn Nyi , Pon Yate မီယာ ,Carton,Moe Myint Tane,မောင်မျိုး,Yu Wa Yi ,tg-nwai ,Welcome , Pauk,mgngal(မောင်ငယ်),Taungoo-,တားမြစ်ထားသော(၊ သုခမိန်။) myooo.nyan ..နှင်းပွင့်ဖြူလေး , Apprenticeship …စတဲ့ ဘလော့တွေဆီ ကိုလဲ သွားရင်း ဖတ်ရင်း အားကျရင်းပါ..)
ဘလော့တွေလည်ရင်း၊ အိုးဝေမှာ စာအသစ်တင်ချင်လို့ ရေးမယ် ကြိုးစားနေရင်းက ကျွန်မ နှစ်သက်အားကျ လေးစားခဲ့ရတဲ့ ဆရာမကြီး စိန်စိန်ရဲ့ “တိမ်တောင်သဖွယ်” ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်တွေ့ရှိ ဖတ်ရှု့ခဲ့ရပါတယ်။ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရင်း အကြောင်းအရာ ကောင်းလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေနိုင်သော စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအား ကောင်းကြသည့် ကျွန်မ၏ ဘလော့ဂါ မောင်နှမများ၏ စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအချက်များ ကိုလည်း မှန်းဆမိပါ၏။။ (ဆရာမကြီး၏ လေသံကို အတုယူ ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။)။
ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာမကြီး၏ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှရင်း အိုးဝေ၏ ”စာပေထုတ်လုပ်နိုင်မှု့ စွမ်းအား” ကိုဖြည့်ပေး လိုက်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ မောင်နှမများ ဆထက်တံပိုး စာပေကောင်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေ….
“ကြက်ဥအရောင် တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကျယ်” ဟူသော စကားတစ်ရပ်ရှိပေရာ ကျွန်မအနေနှင့်တော့ မင်းရေးသာမက စာပေရေးရာမှာလည်း ထိုကဲ့သို့ပင် အသိခက်လှသည်ဟု ထင်မြင်မိပေသည်။
ကျွန်မအနေနှင့် စာပေရေးရာ စာပေမှု့အတွက် ယနေ့တိုင် အသိခက်နေသော အကြောင်းတစ်ရပ်မှာ ”စာပေထုတ်လုပ်နိုင်မှု့ စွမ်းအား” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မင်စက်ကျရာ ဝတ္ထုဆောင်းပါးကဗျာ ဖြစ်စေနိုင်သော တကယ့် ပါရမီရှင်ကြီးများမှာ စာပေတစ်ပုဒ်ကို မည်သို့ ဖြစ်ရှိပေါ်ပေါက်စေနိုင်စွမ်း ရှိကြသည်ဟု မသိရစေကာမူ ကျွန်မတစ်ဦးတည်းအတွက်ဆိုလျင် အင်မတန်မှ အမှန်းအဆခက် အသိခက်လှသော အခြေအနေ၌ တည်ရှိပါသေးသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်မ၌ စာရေး၍ အင်မတန်ကောင်းမည့် အကြောင်းအရာလေးတွေ အသင့်ရှိနေတတ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မည်မျှကောင်းမွန်သော အကြောင်းအရာကိုဖြစ်ပါစေ စိတ်ကလိုလိုချင်ချင် ရေးချင်စိတ် ပေါ်မလာပဲနှင့် ကျွန်မရေး၍ မဖြစ်ပါ။ ဒါလောက်ကောင်းနေတဲ့ အကြောင်အရာလေးတစ်မျိးကိုမှ အကွက်ဆင်ပြီး ရေးမချနိုင်ကောင်းလားဟု စာရွက်နှင့် ကလောင်ကို အတင်းဆွဲပြီး သဲသဲမဲမဲ ကြိုးစားကြည့်သော်လည်း စိတ်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မရေးချင်လျင် တကယ်ကို ရေးမရပါ။ ထိုအခါမျိုးတွင် “ကလောင်ကြီး တရွယ်ရွယ် ရေးမယ်လို့ခဲ၊ ရွှေညဏ်ရှင် ကလောင်မှူးမှာ ဦးနှောက်မှိုစွဲ” ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာချိုးတစ်ပုဒ်နှင့် သရော် ပြောင်လှောင်ကာပင် သြချ ယူရတတ်ပါသည်။
ကဲ-ဒါဖြင့် လိုလိုချင်ချင် ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုစောင့်ယူရသလဲ၊ ဘယ်လို အခြေအနေ အချိန်အခါမျိုးမှာမှ လိုလိုချင်ချင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖြစ်လာတတ်သလဲ ဆိုလျင်လည်း ပြောရခက်ကြီးပင် ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ အမှန်ကတော့ ထိုအချိန်အခါမျိုးမှာ စောင့်ယူ၍လည်း မရပါ။ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေ အချိန်အခါကိုလည်း ကြိုတင်ခန့်မှန်း တွက်ဆ၍ မရတတ်ပါ။
ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် တွေးကြည့်မိသည်မှာ အလျဉ်းသင့်သော အချိန် တစ်ချိန်တွင် ဦးနှောက်အတွင်း၌ သိုမှီးထားသော မှတ်ညဏ် (ဝါ) အသိတရားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာ အမြင်အတွေ့ကြောင့် မနောဟဒယသို့ ရိုက်ခတ်လာသော ခံစားမှု့သည် (လျပ်စစ်ဓာတ်ဖိုနှင့် ဓာတ်မ ပေါင်စပ် သွားသလို) ပေါင်းစပ် လိုက်မိသော အခါတွင် စာပေထုတ်လုပ်နိုင်မှု့ စွမ်းအားသည် လျှပ်ပျက်လိုက် သကဲ့သို့ လင်းခနဲ လက်ခနဲ ပေါ်ထွက် လာသည်ဟုပင် ဆိုဖွယ်ရာရှိပါသည်။
ဤသို့ဆိုသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အမြင် အတွေ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခု၏ ပရောဂကြောင့် စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအား ပေါ်ပေါက်လာရသည်ဆိုလျင် ထိုအမြင် အကြား တွေ့အကြုံကို ချရေးခြင်းပင် စာပေအမည် ခံလိုက်ပေပြီလော၊ စာရေးဆရာ ကလောင်ရှင်တို့သည် စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအားကို ရရှိစေရန် ထိုအမြင်အကြား အတွေ့အကြုံ အကြောင်းအချက်မျိုး တွေကိုပင် ပစ်ပုံပြီး အားကိုးသမှု့ ပြုနေရ ပေသလောဟု စောကြော မေးမြန်းစဖွယ် ဖြစ်ရှိ လာပြန်ပေသည်။
အမှန်မှာ ထိုအဆင့် ထိုအစိတ်ပိုင်းသည်ပင်လျင် “ ပညာခန်း” ဖြစ်ပါ၏။ ဤနေရာတွင် ကျွန်မ အသည်းစွဲလောက်အောင် မှတ်မိနေသော စာရေးဆရာ ကိုသန်းဆွေ (နာမည်ကျော် အလွမ်းဆရာ) ၏ စကားကလေး တစ်ခွန်းကို ထုတ်ဖေါ် တင်ပြချင်ပါသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာ သစ်သားတုံးတစ်တုံး ။ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကို တွေ့ရပြီဆိုပါတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ သစ်သားတုံးအကြောင်းကို ရေးမလား၊ ဖန်ခွက်အကြောင်းကို ရေးမလား၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ သစ်သားခွက် တစ်ခွက်အကြောင်းရေးချင်တယ်”
ဤစကားလေးမှာ အတိုဆုံးနှင့် အနက်နဲ အသိမ်မွေ့ဆုံး အရှင်းဆုံး သရုပ်ဖေါ်စွမ်းသော စကားကလေးပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဤဥပမာတွင် သစ်သားတုံးမှာ တကယ်ရှိသည်။ ဖန်ခွက်မှာလည်း တကယ်ရှိသည်။ သစ်သားခွက်ကလေးကား တကယ်ရှိရှာသည် မဟုတ်ပေ။ သစ်သားတုံးနှင့် ဖန်ခွက်ကို အကြောင်းပြုကာ သစ်သားခွက်ကလေးကို မိမိ၏ စိတ်ဓာတ်ခံစားမှု့ဖြင့် ဖန်တီး ယူလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
မျက်လှည့်ပွဲများတွင် လက်ကိုင်ပုဝါ စီးကရက် စသည်များကို လက်ထဲမှ ဖျောက်ပစ်လိုက်ပြီး လေထဲမှ ပြန်ဆွဲ ယူပြလိုက်သလို တကယ် မဟုတ်သော တကယ်မဖြစ်သော အရာကို သရုပ်သဏ္ဍန်နှင့် တကွ ပေါ်ပေါက်လာကာ တကယ်ဟု ထင်မြင်ရအောင် ဖန်တီး ပြုလုပ် ပြသခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ ထို“ ဖန်တီးမှု့” သည်ပင် “ပညာ” ဖြစ်ပါ၏။
သို့ဖြစ်လျင် ဖန်တီးမှု့ မဟုတ်ပဲ တကယ့်အကြောင်းအရာကို တကယ်ရေးချလိုက်လျင်ကော ပညာ မခေါ်ထိုက်တော့ပြီလော ဟု စောဒက တက်ဖွယ် ကျန်ရှိပေသေးသည်။ ဤသို့တည်း မဟုတ်သေးပါ။ တကယ့်အကြောင်းအရာကို တကယ်ရးသင့် ရေးထိုက်ဖြစ်လာ၍ ရေးချလိုက်ခြင်း သည်လည်း ပညာသဘော သက်ရာက် ဝင်ဆနိုင်သည်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ ထိုတကယ် အကြောင်းအရာသည် တစ်နေရာမှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည် မှန်စေဦး ၊ ထိုအကြောင်းအရာကို ပရိတ်သတ် ရှေ့မှောက်သို့ အရောက် ဆွဲယူလာကာ စာလုံးများဖြင့် စီခြယ်ပြီး ပုံသဏ္ဍန် ထင်ဟပ် စေသည်ကတော့ စာရေးဆရာ ကလောင်ရှင်တို့၏ ပညာစွမ်းပင် ဖြစ်ချေသည်။
ဥပမာ လူထုဦးလှ၏ “လှောင်ချိုင့်တွင်းမှ ငှက်ငယ်များ” သည် ထိုဇာတ်လမ်းပါ ဇာတ်ဆောင်သူတို့၏ ဘဝအထွေထွေကို အပိုအလိုမရှိ ရေးခြယ်ထားခြင်း ဟု ဆို၏။ တစ်ဖန် ထိုအထဲမှ ဆက်ရန် ရှိနေသေးသော “အားလုံးကောင်းကြရဲ့လား” ၏ ဇာတ်လိုက်ကျော် ချစ်သဲ အကြောင်းကိုလည်း “ဆယ်ကြိမ်မြောက် အလည်ရောက်ခြင်း ” အမည်ဖြင့် ဆရာမြသန်းက ရေးချယ် တင်ပြထားပြန်သည်။ ဤတွင် စာရေးဆရာတို့၏ ပညာစွမ်းကို ကွယ်ဝှက်ထိန်ချန်ကာ အကြောင်းအရာကိုက စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေလို့ပါဟု ဆိုနိုင်ဦးမည်လော။
တကယ့်အကြောင်းအရာ တကယ်အဖြစ်အပျက်ပင် မှန်ပါစေ စာရေးဆရာသည် ဖော်တန်တာကို အရင် ဖော်ပေးရ၏။ မြှုပ်တန်တာကို မြှုပ်ထားရ၏။ အင်မတန် ရုန့်ရင်း ညစ်ညမ်းသော အကွက်မျိုးကိုပင် ပညာစွမ်းဖြင့် ပြေပြစ်နုနယ်စေရ၏။ မီးပွင့်မည် ခလုတ်တိုက်မည့် စာသားများကို ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာ ဘရိတ်အုပ်နိုင်ရ၏။ တကယ်တော့ ရသစာပေမြောက်အောင် ရေးနိင်စွမ်းသည်မှာ ခက်ခဲလှသော ပညာတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်မျှကောင်းမွန်သော အကြောင်းအရာပင်ဖြစ်ပါစေ စာရေးဆရာ၏ သရုပ်ဖေါ် အမွှမ်းတင်မှု့ပေါ်မှာ ခိုမှီ မူတည်၍သာ အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်စွမ်းခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
စာရေးသူတို့၏ စွမ်းရည်မှာလည်း သူ့ညဏ်နှင့်သူ သူဟန်နှင့်သူ ဆိုသလို အထွေထွေ အပြားပြားပင် ရှိနေပါသေးသည်။ ကြက်သားဟင်းဟု အမည်ပညတ်ချက် တစ်မျိုးတည်းနှင့် ခေါ်တွင်နိုင်စေကာမူ ဟင်းစပ်ပုံ၊ ချက်ပြုတ်ပုံ၊ အချိန်အဆချင်း လက်ရာချင်း ကွာခြား၈ အရသာတစ်မျိုးစီ ပေါ်ပေါက် နိုင်သလိုပင် ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်မသည် ရေးထားသည့် အကြောင်းအရာ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ထက် အကွက်ဆင်ကာ သရုပ်ဖော် အမွှမ်းတင်ထားသော စာပေရေးသားမှု့ အပေါ်မှာ အခါများစွာ အရသာယူ၍ ခံစား မိဖူးခဲ့ပေသည်။
ကျွန်မအနေနှင့် တကယ့်အဖြစ် တကယ့်အကြောင်းအရာကို ရေးမိဖူးသည်မှာတော့ နှစ်ကြိမ်မျှသာ ရှိပါသေး၏။ မမေ့တဲ့နိုင် အခန်းမှ ရေးဖူးသော “ သိချင်စမ်းပါဘိ” နှင့် “ခရီးဆက်ကြပါစို့ ” ဆောင်းပါးပင် ဖြစ်ပေသည်။ သို့တိုင်အောင် ခရီးဆက်ကြပါစို့ မှာ အဆာပလာ အမွမ်းအမံ တွေ ပါရှိနေသေး၍ တကယ့် အကြောင်းအရာကို တကယ် ဇစ်ဇစ်မြစ်မြစ် ဖော်ထုတ် ရေးသားခဲ့ခြင်းမှာ “သိချင်စမ်းပါဘိ” စာမူတစ်ခုတည်းသာ ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
ထိုစာမူကို ရေးရသည်မှာလည်း မလွယ်ကူပေ။ ကျွန်မသည် တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် နေရာဒေသ တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည့် အချိန်ဆီသို့ ရောက်အောင် လွန်ခဲ့ပြီးသော ၉နှစ်ကျော် ၁၀ နှစ်ခန့်ဆီသို့ မရောက် အရောက်ဆိုသလို မောကြီးပန်းကြီး ပြန်သွားခဲ့ရ၏။ အဖြစ်အပျက်မှာ ကျွန်မတစ်သက်တွင် မမေ့နိုင်လောက်ပါဟု ဆိုသည့်တိုင်အောင် ကျွန်မ သတိရသည်မှာ သာမန်မျှသာ ရတတ်လေ့ ရှိပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ အကြောင်းအရာ၏ တစ်စိတ် တစ်ဝက် လောက်ကိုသာ အလေးအနက်ထားကာ ပြန်တွေးမိတတ်၏။
ထိုတစ်နေ့ ကတော့ ကျွန်မသည် ထိုအကြောင်းအရာများကို စစ်စစ် ပေါက်ပေါက် စေ့စေ့ငှငှ အသေးစိတ် အကွက်ချပြီး ပြန်တွေးနေမိ၏။ ဟိုယခင် ၉နှစ် ၁၀ နှစ်ခန့်ကအတိုင်း ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားမှု့ ပေါ်ပေါက်လာကာ ရင်ထဲမှာ ရိုက်ခတ် လာတော့မှသာ ရေးချင်မှု့အပေါ်မှာ “ဇော” ကပ်လာပါမှ လည်း ရေးသားသည့် အကြောင်းအရာထဲမှာ အသက်ဝင်လာတတ်သည်။
သို့ကြောင့်လည်း ဆွေးရိပ် လွမ်းရိပ် ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ အလွမ်းဝတ္ထုကို ကောက်ရေးလျင် အလွန်လက်တွေ့ပြီး အသက်ဝင်လာတတ်သည်။ ရွှင်လန်းမြူးကြွနေသည့် အခါများတွင် သောကွက် ဟားကွက်ကလေးတွေကို မိမိရရ ရေးနိုင်စွမ်းသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် အမှတ်သညာ ပြုထားရပါ၏။ “ ယေဘုယျ” ဟု ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသည်မှာတော့ “ခြွင်းချက်” ရှိနေသေး သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဓာတ်သည် လည်းကောင်း၊ စာရေးသူ၏ ညဉ်သည်လည်းကောင်း ၊ စာပေမှု့သည် လည်းကောင်း မမှန်းဆနိုင်ဖွယ်ရာပင် ဆန်းကြယ်လှသည် မဟုတ်ပါလား။
ရံဖန်ရံခါ အင်မတန်စိတ် ညည်းညူထိုင်းမှိုင်း နေသည့်အထဲမှာပင် ဟားကွက် သောကွက်တွေမှာ ထင်းခနဲ လင်းခနဲ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သလို တွေ့မြင် ကြားသိလိုက်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကျကျ အတွေးအခေါ်မျိုး ပေါ်ပေါက်ချင်လည်း ပေါ်ပေါက် တတ်ပေသေးသည်။ ရံခါတွင်လည်း ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် အကွေ့အကောက် အလိမ်အတွန့်တွေနှင့် ပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်သွားတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေတွင်မူ အသည်းခိုက်မျှ ထိခိုက်ခံစားမူ ပေါ်လာမှ ရေးချင်သည့် စွမ်းအားကို ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ဘာမဟုတ်တာကလေးနှင့်ပင် ရေးချင်အားက ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။
ကျွန်မ၏ နုနယ်လှသော စာရေးသက်အတွင်း၌ အမှတ်တရ ဖြစ်စေတတ်လောက်သော အခြေအနေ အကြောင်းအချက် တစ်ရပ်ကို တစ်ကြိမ်သောအခါက တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးပါ၏။ ထိုအချိန်က ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနှင့် ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ရှိ လာသော စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအားကို ဆက်စပ်၍ မပြမီ ရေးသားလိုက်မိသော ဝတ္ထု ကလေးကို ပထမဦးစွာ ဖော်ပြပါ၏။ ထိုတ္ထုတိုကလေး၏ အမည်ကတော့ “ဝမ်းတစ်ထောင်” ဖြစ်ပါသည်။
နံနက် ဝေလီဝေလင်း အချိန်၊ ကြိုးစားပမ်းစား မီးဖိုဆောင်တွင်းမှ အလုပ်များနေသော အတင်သည် ရေနွေးအိုးမှ ထွက်လာသည့် အခိုး အငွေ့ကလေးများကိုကြည့်ရင်း သူ၏ အိပ်ချင် မပြေသေးသော မျက်လုံးကို အခါခါ ပွတ်သပ်ပြီး သမ်းဝေနေလေသည်။ အခန်းတွင်းမှ “ အဟမ်း” ဟု ချောင်းသံပေး၍ လှုပ်ရှားသော အသံကိုကြားရမှ မျက်စိကျယ်လာကာ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ဓားငယ်နှင့် လှီးနေတော့၏။
သူသည် မိုးမလင်းမီ အချိန်ကလေးမှာ ဇိမ်နှင့် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်နေလိုသေး၏။ သို့သော် သူ၏ လင်တော်မောင် အဆင်သင့် ပွဲတော်တည်နိုင်ရန် ဤသို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရသည်မှာ နေ့စဉ်နှင့် အမျှပင်။ သူ့လင်တော်မောင် ပင်စင်ရ အငြိမ်းစား ရာဇဝတ်အုပ်မင်း ဦးစိုးတင်မှာ နံနက် လင်းလျင် လင်းချင်း ဆာလောင် မွတ်သိပ်တတ်သောကြာင့် ဖြစ်သည်။
ဦးစိုးတင်မှာ ပင်စင်လခအပြင် မိဘများ အမွေပေးခဲ့သော တိုက်တစ်လုံးကို ငှား၍ ရသော တစ်လလျင် ၈၀ ကျပ်မျှသော ငွေကိုပါ မီးဖိုဆောင် စားသောက်မှု့တွင်သာ တွင်တွင်ကြီး အသုံးပြုနေလေသည်။ သူ၏ ပထမ မယားကြီးမှာ နောက်သုံးနှစ်လောက်က ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အိမ်ရှင်မ မရှိ၍ အစားအသောက် ကျပ်တည်း ခက်ခဲမှု့ ဒဏ်ကို ကြာရှည်ခံနိုင်စွမ်း မရှိသောကြောင့် မကြာမီအတွင်းပင် အိမ်ထောင်သစ် ထူပြန်၏။ ထိုဒုတိယ မယားသည် သူ၏ ဇီဇာ ကျယ်လွန်းလှသော မီးဖိုဆောင် တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်နိုင်၍ စိတ်ချင်းအခန့် မသင့်ဖြစ်ခါ ကွဲခဲ့ကြပြီး သည်တွင်မှ ယခု အတင်နှင့် တတိယအကြိမ် အိမ်ထောင်ပြုပြန်သည်။ အတင်ကား အတော်ပင် စိတ်ရှည်သည်ဟု လူအများ ချီးမွမ်းသံကြားရ၍ သဘောကောင်းသည် ဟုလည်း အသိအမှတ် ပြုကြသည်။
မျက်နှာသုတ်ပဝါ လည်တွင်ပတ်၍ ဗိုက်ကြီးရွှဲရွှဲ ဗိုလ်ကေ စုတ်ဖွားနှင့် အိပ်ရာမှထလာသော ဦးစိုးတင်က မေးလေသည်။
“ဆူပြီလေ ဆူလို့ကော်ဖီတောင် ဖျော်ပြီးပြီ”
“အေးအေး သိပ်လည်းမချိုစေနဲ့နော်၊ ပေါင်မုန့်ကော ကြက်ဥနှစ်ပြီး ကြော်သေးသလား”
“ ကြော် တုန်းပဲ”
“ နံပြားနဲ့စားမှာလား နံပြားပါဝယ်ရမလား”
“ ထမင်းကြမ်းနဲ့ပဲ ကြော်ပေးပါကွာ၊ နံပြားမဝယ်ပါနဲ့တော့၊ ငါ သိပ်ဆာနေတယ်။ ညက ငှက်ပျောသီး ထစားဖို့ဟာ မစားရဘူး”
“ ကဲ …မျက်နှာသစ်တော့လေ။ ပူပူနွေးနွး စားရ သောက်ရအောင်”
ဟု ပြောမှ ဦးစိုးတင် အိမ်သာခန်း ဝင်သွားလေသည်။ ထို့နောက်မှ မျက်နှာသစ်ရင်း
“ ညက ပုစွန်သုပ် စားကောင်းတယ်ကွာ ၊ ဒီမနက်လည်း ပုစွန်သုပ်ပါဦး၊ ဝက်သားလည်း သုံးထပ်သားကောင်းကောင်း ကြည့်ဝယ်ပေးပါကွာ ၊ မနေ့က ဝက်သားများ စားရတာ မတင်းတိမ်လိုက်တာ” ဟု ပါးစပ်မှ အမျှင်မပြတ် ပြောကာ မျက်နှာသုတ်၍ အသင့်ပြင်ထားသော စားပွဲတွင် ထိုင်ပြီး စားသောက်နေလေသည်။
ပြီးလျင် အလယ်ခန်း ကြောင်အိမ်ကို ဖွင့်၍ ဘူးတစ်ခုထဲမှ ချိုချဉ် ချောကလက်များကို နှိုက်ယူကာ အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းရှိ ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ပြီး တမြုံ့မြုံ့ စားနေလေ၏။
မကြာမီ အတင် ဈေးမှပြန်လာရာ “ ရခဲ့ရဲ့လားကွာ၊ သြော်….ပန်းဂေါ်ဖီတွေလည်း ပါသကိုး ၊ ဟန်တယ်ဟေ့ ဝက်ခြေထောက်စွပ်ကို ပန်းဂေါ်ဖီခတ်” ဟုပြောရာမှ မီးဖိုတွင်းသို့ ဝင်လိုက်လာပြီး ထမင်းစားပွဲမှ ကုလားထိုင်တွင်ထိုင်ကာ၊ ၊ ဘယ်ဟင်းကို ဘယ်လိုချက် ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုကြော် နှင့် ဝေဖန် ခန့်ခွဲနေသည်။
အတင်သည် အင်္ကျီ လက်ကိုပင့်တင်ပြီး စဉ်းတီတုံးကို ဆွဲကာ ဝက်သားခုတ်လေသည်။ သူမ၏ ကျောပြင်တွင် စိုရွှဲသော ချွေးများမှာအင်္ကျီနှင့် ကပ်နေ၍ အသားများ အကွက်လိုက် အစင်းလိုက် ပေါ်လွင်နေသည်။ နဖူးတွင်လည်း ချွေးပေါက် ချွေးစုကလေးများ အစီအရီနှင့် -
“ဝက်သားကို အသားချည်း သပ်သပ်ယူပြီး ပြုပ်ကျော် လုပ်ထားဟေ့ ၊ ကျန်တာ တစ်ဝက်ကို သရက်သီး ကုလားတယ်နဲ့ အချဉ်ချက်၊ တစ်ဝက် ငါးပိနဲ့ချက်၊ စွပ်လုပ်ရင် ပန်းဂေါ်ဖီကို မမေ့စေနဲ့နော်၊ စားခါနီးမှ ခပ်စားမယ်။ မီးအေးအေးနဲ့ ဆူနေပစေ၊ လိမ္မော်သီး ဘာလို့ မဝယ်ခဲ့သလဲကွဲ့ ၊ အေးလေ တော်ကြာမှ သွားဝယ်ပေါ့ကွာ၊ လက်ဖက်နဲ့စားဖို့ ရွှေပုစွန်ခြောက် ကုန်နေတာရာ ဝယ်ခဲ့သေးသလား” နှင့် အဆက်မပြတ် ပြောဆိုနေသော စကားများကိုလည်း အတင်သည် လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းမှ အဖြေပေးနေရသည်။
ဤကဲ့သို့ ကျယ်ဝန်းလှသော အစားမျိုးကို နံနက်မလင်းမီက ထ၍ လုပ်ကိုင်နေရသည်မှာ နေ့မီး ညမီး ဆက်၍သာ နေတော့သည်။ ဤတွင်မူ မကသေး အချို့သော ဂျာနယ်များမှ ထူးပေ့ဆန်းပေ့ဆိုသော စားသောက်ဖွယ်ရာများ ကိုလည်း ကတ်သီးကတ်သတ် ချဲ့ထွင် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခိုင်း၍ စားသောက်သည်။
အတင်မှာ မီးဖိုတွင်သာ နေကုန်နေ၍ အခြားအိမ်မှု့ ကိစ္စများကို သိမ်းဆည်းရန် အချိန်မရသဖြင့် အိပ်ယာထဲတွင် ခေါင်းအုံး ၊ခြင်ထောင်၊ စောင် စသည်တို့မှာ မနက်က ထလာသည့်အတိုင်း ဖရိုဖရဲ ကစဉ်ကရဲ ဖြစ်နေသော်လည်း ညအိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် ထိုအတိုင်းပင် ဝင်အိပ်လိုက်ကြသည်။ အဝတ်အစားများကိုလည်း (၇) ရက်တစ်ပတ်ကြာ၍ ချွေးစော်နံလွန်း ညစ်လွန်းမှသာ လျှော်ရသည်။
ဖုန် အမှိုက် စက္ကူ စာအုပ် စသည်တို့လည်း မည်မျှပင် ရှုပ်ထွေးနေစေကာမူ ဦးစိုးတင်၏ အပြစ်တင်ခြင်းကို မခံရ။ အစားအသောက်ဘက်တွင် လစ်ဟင်းလျင်သာ အကြိမ်းအမောင်း ခံရတတ်သဖြင့် တစ်အိမ်လုံးတွင် ဘယ်လိုနေနေ မီးဖိုဆောင်ကိုသာ ဂရုစိုက်ရတော့သည်။
အတင်မှာ မိန်းမသားဖြစ်သည့် အလျောက် အဝတ်အထည် အဆန်းအပြားလေးများ မြင်လျင် ဝတ်ချင် ဆင်ချင်စိတ် ပေါ်လာ၍ တစ်ခါ တစ်ရံ “အတင့်ဖို့ ဝယ်ပေးပါလား” ဟု ပူဆာမိသည့် တိုက်အောင် “ အဝတ်ပဲကွာ ၊ ထမီ ၃-၄ ထည်ရှိရင် တစ်နှစ်စာ လောက်တာပဲ ”ဟု ပြန်ပြောလေ့ရှိသည်။
ထိုစကားမျိုးအတွက် အတင်စိတ်ကောက် သွားလျင်လည်း လေအေးကလေးဖြင့် မျက်နှာချိုသွေးလျက် “ ခုလ ငွေပိုတော့ ဝယ်ဝတ်တာပေါ့ကွာ၊ ကြိုက်တာ သဘောရှိ ဝယ်ဝတ်ပေါ့ ဟုတ်လား” ဟု ချော့မော့ တတ်ပါသေးသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ပင်စင်လခနှင့် တိုက်လခမှာ ပိုသည်ဟု ဘယ်တော့မှ မရှိ။ မီးဖိုဆောင်စာ စားရိတ်နှင့်ပင် ကုန်လေပြီ။
ထို့ကြောင့် အတင်သည် ဦးစိုးတင်အပေါ်မှာ မကျေနပ်မှု့ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ သားတွဲလဲ သမီးတွဲလဲ မရှိဘဲနှင့် သူတစ်ယောက်အတွက်မှာ ထိုင်ရသည်မရှိ၊ ထမီတိုတိုဝတ် အင်္ကျီလက်မောင်းပင့်ကာ ချွေးဒီးဒီးကျအောင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပ်ဆောင် ရသောကြောင့်လည်း ကြာရှည် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရည် ရှိမှရှိပါ့ မည်လားဟု တစ်ခါတစ်ရံ တွေးမိပြန်သည်။
ဤကဲ့သို့ အလုပ်များနေစဉ်တွင် “ လိမ္မော်သီး စားချင်တယ်ကွယ် ဝယ်ချည်ပါဦး ၊ လက်သုပ်တစ်ခုခုလည်း ဝယ်ခဲ့ပါ” လုပ်နေပြန်သဖြင့် ဈေးသို့တစ်ခေါက် ပြေးရ ပြန်လေသည်။
စားသောက်ပြီးစီးသည့် အခါ ပန်းကန်ခွက်ယောက် ဆေးကြောနေဆဲ “လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ လက်ဖက်သုပ် ယူခဲ့ကွာ ” ဆိုသဖြင့် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်၍ ကျွေးမွေးရသည့် ဒုက္ခက တစ်ဖက်နှင့် စိတ်မော လူမောဖြစ်ကာ သက်ပြင်း ချမိပြန်သည်။
ဝေလီဝေလင်းက ထ၍ စားဖို့သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ် ကြော်လှော်ကျွေးပြီး၍ အိပ်ယာသို့ အပန်းပြေ ဝင်တော့မည့် အချိန်တွင်လည်း “သန်းခေါင်ထမင်းစားရအောင်ကွာ မအိပ်ပါနဲ့ဦး ၊ ညနေက ထမင်းစားစောလို့ ဆာလာပြန်ပြီ” ဟု ပြောကာ ည (၉)နာရီလောက်တွင် ချက်ခိုင်းပြီး သူကိုယ်တိုင် ကြက်ဘဲရောင်းသော အိမ်များသို့ မီးဆွဲတစ်ခုနှင့် သွား၍ ဝယ်သည်မှာလည်း ၄ရက် တစ်ခါ ၅ရက် တစ်ခါ ဆိုသလို လုပ်ရလေသည်။
ဤမျှ အလုပ်များလှသည့် မီးဖိုတွင် အတင် တစ်ခါက နေမကောင်း၍ နှစ်ရက် သုံးရက် မီးဖိုသို့ မဝင်နိုင် သည့်အခါ သူ့အား ခင်မင်သော ရဲသားကလေး တစ်ယောက်၏ မိန်းကလေးကို ခေါ်၍ ခိုင်းလေသည်။ ထိုမိန်းကလေးမှာလည်း သူချေးထူသလောက် မလုပ်နိုင်၊ သူကလဲ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ခိုင်းရမည်ကို အားနာနေ၍ နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း အတော်ပင် စိတ်တိုင်းမကျ စိတ်အိုက်ပြီးလျင် နေမထိ ထိုင်မထိ ဖြစ်ခဲ့ရဖူးလေသည်။
ထမင်းချက်လည်း မငှားနိုင်၊ ငှားနိုင်သည့် တိုင်အောင်လည်း သူဇီဇာကျယ်သလောက် မလုပ်နိုင်၍ ပြေးမည်မှာ သေချာနေသည်။ အများနည်းတူ စားသောက်ချိန်တွင် ထုံးစံအတိုင်း ဝတ္တရား အတိုင်း ချက်ပြုတ်ကျွေးမွးရုံ အပြင် သန်းခေါင် သန်းလွှဲ တစ်ရေးနိုး မိုးမလင်းမီ အချိန်များတွင် တစ်ခါနှစ်ခါလည်း မဟုတ် ၊ ၃-၄ ရက်ခြား သို့မဟုတ် နေ့ဆက်လုပ်ပေးရမည့် အလုပ်ကို မည်သူ လုပ်ပေးလိမ့်မည်နည်း။ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာကား စည်းကမ်းမသတ်ပဲ ထားလျင် ထားတိုင်း လုပ်တိုင်း ကျယ်ဝန်းလှပေသည်။
ထိုနေ့တွင်ကား အတင်သည် ထဘီဆန်းကလေး တစ်ထည် ဝယ်ပေးရန် ပူဆာသော်လည်း “ အဝတ်က အရေးမကြီးပါဘူးကွာ ” ဟုပြောလိုက်သဖြင့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ မကြည်မသာ ဖြစ်နေ၍ မီးဖိုတွင် စိတ်မပါတော့ပဲ ငြီးငွေ့ ထိုင်းမှိုင်းနေသောကြောင့် ဦးစိုးတင်၏ အဆူအပူ ခံရသည်မှာ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်နေရာ ဧည့်သည်တစ်ယောက်နှင့် အတူ သန်းခေါင်ထမင်း ကျွေးရသဖြင့် ည၂ နာရီလောက်မှ အိပ်ရာဝင်ရသည့်အခါ ကိုယ်တော်မြတ်မှာ အရက်ရှိန်ကလေး တဖိန်းဖိန်းနှင့် အိပ်ပျော်သွားသော်လည်း အတင်မှာ မအိပ်နိုင်၊ သူ့ဘဝ သူ့အဖြစ်ကိုသာ တွေး၍ ဆွေးနေတော့သည်။
“ အတင်ရေ …ဟေ…အတင်” ဟု မီးဆွဲကိုင်ကာ ဟိုကြည့် သည်ကြည့် ခေါ်လိုက်သော ဦးစိုးတင်သည် ခါတိုင်းနေ့များကဲ့သို့ ဝေလီဝေလင်း အချိန်တွင် မီးဖိုတွင်း၌ အတင် အလုပ်လုပ်နေမည် အထင်နှင့် အဆင်သင့် စားသောက်ရန် ထလာခြင်းမျှ ဖြစ်ရာ မီးဖိုတွင် မီးလည်းမရှိ ၊ အတင်ကိုလည်း မတွေ့ရသောကြောင့် စိတ်ပူပန်ပြီး ခေါ်လိုက်မိခြင်း ဖြစ်လေသည်။
သို့တိုင်အောင် ဘာတစ်ခွန်းမျှ တုံ့ပြန်သံ မကြားရ၍ စိတ်ပျက် လက်ပျက် ထမင်းစားပွဲတွင် ထိုင်ချလိုက်မှ အနံ လက်နှစ်သစ်၊၊ အလျား တစ်တောင်ခန့်ရှိ ပိတ်စကလေးနှင့် ရစ်ပတ်ထားသော စာခေါက် ကလေးတစ်ခုကို ရယူ ဖတ်ရှု့ရလေတော့သည်။
လူတိုင်း လူတိုင်းတို့၌ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လုပ်မှုဆောင်တာများ အဘယ်မျှ များပြားလှသည်ဟု ဒုက္ခအရပ်ရပ်ကို သိပြီး ဖြစ်လေရာ ကိုစိုးတင်အဖို့ ထိုမျှ မကအောင် တာဝန်ကြီးလေးလှသောကြောင့် သင်္ကာမကင်းရှိ၍ ညက အိပ်ပျော်နေစဉ် ဝမ်းဗိုက်ကို တိုင်းကြည့်မိရာ ပူးတွဲပါ ပိတ်စနှင့် အညီ တစ်တောင် နီးနီးရှိနေသဖြင့် ကျယ်ဝန်း များပြားလှသော ဝမ်းတစ်တောင်၏ တာဝန်ကို မထမ်းဆောင် နိုင်သောကြောင့် ထွက်သွားပါပြီ။
ကဲ ….ဝတ္ထုပြီးတော့ ရေးလက်စ ဆောင်းပါးကို ပြန်ကောက်ပါဦးမည်။ ထိုဝတ္ထု ကလေးကို ကျွန်မသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထဲမှာ ရေးခဲ့၍ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ဂျာနယ်ကျော်အုပ်တွဲ ၁၄ အမှတ် ၁ တွင် “အထွေး” ဟူသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ပါရှိခဲ့ပေသည်။
ထိုဝတ္ထုကလေးကို ကျွန်မရေးခဲ့သည့် အချိန်တွင်ကား ကျွန်မသည် အပြင်းအထန် မမာမကျန်း ဖြစ်နေချိန်ပေတည်း။ သေမှာပဲဟု တစ်အိမ်သားလုံးက အတွင်ကျိတ်ထင်မြင် ယူဆနေကြရာမှ အနည်းငယ် ပြန်လည် ထူထောင်စကလေးသာ ဖြစ်ပေသေးသည်။
ထိုစဉ်က မမာလိုက်သည်မှာ ထမင်းကိုဝေး၍ ဘာအစာမျှ မဝင်ခဲ့သည်မှာပင် (၅)လ ကျော်မျှ ကြာရှည်၏။ တစ်နေ့လုံး အဖို့ နွားနို့အဝက်သား ကုန်ရန်ကိုပင် မနည်းကြီး ကြိုးစားအားပေး၍ တိုက်ကျွေး နေခဲ့ရသေးသည်။ လူမှာ အရိုးပေါ် အရေတင်တမျှ ပိန်ချုံးနေ၏။ မေမေနှင့်တကွသော အစ်မများမှာ အစားအသောက်ကို ကျွန်မ မစားချင် စားချင်အောင် ကြိုးစား နေကြရှာ၏။ အနည်းငယ် ထူထောင် နိုင်လာသောအခါ မုန်းဟင်းခါးသုပ် အနည်းငယ်က စ၍ စားသည်။
နောက် ထမင်းကို စားပါမည်ဟု ကျွန်မ ကတိပေးသောနေ့မှာကား ဆရာကြီး မဟာဆွေ၏ “ရတီမှန် ” ဝတ္ထုကို ဖတ်ရှု့ပြီးဆုံးသည့် အချိန်တွင် ဖြစ်ပေသည်။ ဤမျှ မကျန်းမမာ ဖြစ်နေသော်လည်း လုံးဝ မလှုပ်ရှားချင်၊ မျက်စိမဖွင့်ချင်သည့် အချိန်များမှ အပ စာကိုတော့ ကျွန်မ အင်မတန် ကြိုးစားပမ်းစား ဖတ်ရှု့လျက်ပင် ဖြစ်သည်။
“ထိုင်နေလည်း နေမကောင်းဘူး။ အိပ်နေလည်း နေမကောင်းဘူး ဘယ်လိုနေမှ နေမကောင်းဘူး ။ စာဖတ်နေရင် နည်းနည်းသက်သာတယ်” ဟု ကျွန်မ ပြောလေ့ရှိသဖြင့် တစ်အိမ်လုံးက ခွင့်ပြု ထားကြပါသည်။
ရတီမှန် ဝတ္ထုထဲတွင် ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ထားပုံ ပါရှိ၏။ ငရံ့ အကွင်းအကွင်းကြီးတွေကို ကြော်ပြီးမှ ငရုပ် ကြက်သွန် ခရမ်းချဉ်သီးနှင် ဆီသတ်ပြီး ပြန်ချက်ထားသော ဟင်းတစ်ခွက်၊ ဒန့်ဒလွန်ဟင်းချို ပူပူတစ်ခွက်၊ ပြီးတော့ ဘာတွေပါသေးသည်ကို ကျွန်မ ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ချေ။ ကျွန်မက ထိုစာအုပ်ကို အစ်မများလက်သို့ အပ်လိုက်ကာ “ ဒီထဲကအတိုင်း ချက်ပေးရင် အပုထမင်းစားကြည့်မယ်” ဟု ပြောလိုက်ရာ အစ်မများက ချက်ချင်းပင် ဝမ်းသာ အားရ ချက်ပြုတ် စီမံပေးကြသည်။
ထမင်းပွဲ အသင့်ပြင်ပြီး ကျွန်မကို စားစေသော အခါတွင်လည်း အစ်မများက “မဟာဆွေ စာဆိုရင် ကောင်းတာချည်းပဲဆို မဟာဆွေ စီစဉ်ထားတဲ့ ထမင်းဟင်းလည်း ကောင်းရမှာပဲပေါ့၊ တို့လည်း လက်စွမ်းကုန် ချက်ထားတာပဲ” စသည်ဖြင့် ကျွန်မ ရယ်ရွှင်လာအောင် ဝိုင်းဝန်း ပြောဆို နေကြသည်။ သို့ရာတွင် မျက်စိ အမြင်မှာ စားချင်စဖွယ်ရှိသော ထမင်းဟင်းလျာ များသည် ကျွန်မလျှာပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျှ အရသာမတွေ့ နိုင်။ ဘယ်လိုမျှ စားမဖြစ်နိုင် တော့ပဲ လက်လျှော လိုက်ရသည်။
အစ်မများ စိတ်ပျက် လက်ပျက်နှင့် ထမင်းပွဲကို ပြန်သိမ်းကြသော အခါတွင် ကျွန်မသည် ထိုင်ငိုင် တွေးတော နေမိ၏။
“ ငါ ခုလောက် ဇီဇာကြောင်နေတာကို ညီအစ်မချင်း တွေမို့သာပဲ ၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်သာ ဒါလောက် ချေးများနေရင် မိန်းမလုပ်တဲ့သူက မကြာခင် ပစ် ထွက်သွားတော့မှာ”
ထိုအတွေးကို တွေးမိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် ဝင်းခနဲ လက်ခနဲ ဖြစ်ကာ စာရေးချင်စိတ်တွေ ဖျိုးဖျိုးဖျတ်ဖျတ် တက်ကြွလာကြ၏။ကျွန်မသည် အချိန်အနည်းငယ် ဆက်လက် တွေးတောပြီးလျင် အိပ်ယာနံဘေး စာခုံထဲမှ စာရွက်တွေကို ဆွဲယူကာ အိပ်ယာထဲမှာပင် ကာယကံမြောက် ရေးဖြစ်တော့လေသည်။ ရေးရင်းနှင့်လည်း လေးလံ ရီဝေနေသော ဦးခေါင်းကို မကြာခဏ နှိပ်နယ်ပေးရသေး၏။ သည်ထဲက မရေး နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာပြန်လျင် စာရွက်တွေ ဘေးဖယ်ပြီး လှဲအိပ်လိုက်ရသေး၏။ သုံးရက်တိုင်တိုင် ကြိုးစားတော့မှ ဝမ်းတစ်တောင် ဝတ္ထု ပြီးဆုံးသွားသည်။ ကျွန်မက အစ်မများလက်သို့ အပ်ကာ ဂျာနယ်ကျော်သို့ ပို့စေလိုက်ရ၏။
သည်အဖြစ်ကို ပြန်လှန်တွေးတောမိတိုင်းမှာပင် ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် လှုပ်ရှားမိပေသည်။ သာတောင့် သာယာအချိန်အခါ အခြေအနေ မျိုးလည်း မဟုတ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း သာယာရွှင်လန်းမှု့ မရှိ။ လူအနေနှင့်လည်း အနည်းငယ်မျှ သက်တောင့် သက်သာ မရှိသော ဤအခါမျိုးမှာပင် စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအားသည် လှုပ်ရှားပေါ်ပေါက်၍ လာတတ်သေးသည်မှာ အံ့သြစဖွယ်လည်း ဖြစ်နေပါ၏။
ကျွန်မကဲ့သို့ စာပေဝါ နုနယ်သေးသူ၊ အတွေ့ အကြုံ နည်းပါးသေးသူ တစ်ဦးမှာပင် မမျှော်လင့် မထင်မှတ်စကောင်းသော အချိန်အခါ အခြေအနေ မျိုးမှာ ဤလိုဖြစ်တတ် ပါသေးလျင် မင်စက်ကျရာ ဝတ္ထု ဆောင်းပါး ကဗျာ ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းသော ဆရာ့ ဆရာကြီးများတွင် ဆန်းကြယ် ထွေထူးသော ဖြစ်စဉ်များကို မည်မျှ ဖြစ်ရှိ တွေ့ကြုံ ဖူးကြလေမည် မသိပေ။
ထိုဆရာ့ဆရာကြီးများ ဖန်တီးတင်ပြထားသော စာပေများထက် ထိုဆရာ့ ဆရာကြီးများ၏ စာပေထုတ်လုပ်မှု့ စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအချက်များသည် ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားစဖွယ် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါ၏။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ကျွန်မ အနေနှင့် ထိုအကြောင်းအရာ အတွေ့အကြုံမျိုး ကိုပင် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် သိချင်မိလေသည်။
“ ကြက်ဥ အရောင် တိမ်တောင် သဖွယ် မင်းရေးကျယ်” ဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြရာ စာပေရေးရာ စာပေမှု့တို့သည်လည်း ထိုမျှ မကပင် ကျယ်ဝန်း နက်နဲ ဆန်းပြား သိမ်မွေ့ လှပါချေ၏တကား။
(ရှု့မဝ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉၆၁)
“အနုပညာသည်၏ အလောင်း” ..အစရှိသော ဆရာမကြီး စိန်စိန်၏ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချူပ်အား http://www.myanmarnetworknews.com/b/b217/b217.htm တွင်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Posted by မေအောင် at 11:30 AM Links to this post 10 comments